မြန်မာပြည်မှပေးစာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် | burmastar records and references
အားလပ်ရက် – ၄
ကျွန်မ ပုဂံသွားရောက်ခဲ့တဲ့နေ့များကို ရေးသားနေစဉ် အဲဒိရှေ့ဟောင်းမြို့တော်မှာလုံးဝမကြားဘူးတဲ့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဘွယ် ဖြစ်ရပ်ဆိုး တခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ဂျပန်အမျိုးသမီးတ ယောက်ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီမောင်းသမားက သတ်ဖြတ်လိုက် ခြင်းဟာ တစိမ်းတရံစာများ အပေါ် ပျူငှာစွာဆက်ဆံတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရှိလူအများကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား စေခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ ရာဇဝတ်မှုဟာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုလှိုင်းကိုရိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ “ ဒီလိုဖြစ်ရပ် ဆိုးဟာ ဒီနေရာမှာ တခါမျှမဖြစ်ခဲ့ဘူး ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့တော့ နားကိုမလည်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလိုလူစားတွေ မဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလွန်ကိုရှက်မိပါ တယ်။”လို့ အခင်းဖြစ်ပွါးရာ ညောင် ဦးဒေသခံအမျိုးသားတဦးက ကျွန်မတို့ကိုယ်စား ပြောကြားပေးလိုက်ပါတယ်။
လူသတ်တရားခံကို ဖမ်းမိလိုက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမင့် အမျိုးသမီးငယ်ကတော့ ပြန်လည်အသက်ရှင်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ သူမကိုသိခဲ့သူများနဲ့ချစ်ခင်ခဲ့သူ များကို ကျွန်မတို့က အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းကြောင်းစကား ပါးရမှာပါ။
အရာရာဟာ ထာဝစဉ်မရပ်တည်ပါ။ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲပါ။ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဗုဒ္ဓက ဆုံးမပေး တာ နဲ့ ပုဂံကသင်ကြားပေးမှုပါ။
ယနေ့တိုင် မမှားပဲ သေချာနေတာက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမှာကို ကြိုးစားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံရဲ့ မဝေးလှတဲ့အရပ်မှာ တနိုင်ငံလုံးက ဝိဉာဉ် များပူဇော်ရာဗဟိုဌာနဖြစ်တဲ့ မီးတောင်ဟောင်း ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ရှိပါတယ်။ ပုပ္ပါးရဲ့ နှစ်စဉ်ပွဲတော်ဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများကိုသာမက ဒီရိုးရာဓလေ့ကို လေ့လာဘို့ စိတ်အားထက်သန်သူ သောင်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ ဧည့်သည်တွေကိုပါ ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ ဒီရိုးရာဓလေ့ဟာ ပုဂံဘုရင်များ သူတို့အကြောင်းခြင်းရာများအပေါ် သေရေးရှင်ရေးရဲ့ နတ်ဘုရား များအဖြစ် ရပ်တည်ပူဇော်ခံကြတဲ့ အချိန်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာပါ။
ရှေးဒဏ္ဍာရီအရ ဘုရင်အနော်ရထာလက်ထက်က တောင်တော်ပုပ္ပါးပေါ်မှာ ပန်းစားဘီလူးမ တယောက်ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ ထူးခြားတဲ့တန်ခိုးများရှိတဲ့ တော်ဝင်ငယ်ကျွန်တယောက်ဟာ လူစွမ်းကောင်းရဲ့လျင်မြန်မှုနဲ့ ပုဂံကလာပြီး ဘုရင်အနော်ရထာအတွက် ပန်းများလာစုဆောင်းခဲ့ ပါတယ်။ မြော်လင့် ထားသလိုပါပဲ။ ဒီလူစွမ်းကောင်းဟာ မိမိကိုယ်ကိုတန်ခိုးနဲ့ လှပအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘီလူးမကို တွေ့မြင်သွားကာ
ရည်ငံမိကြပါသတဲ့။ လူစွမ်းကောင်းနဲ့ဘီလူးမတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းမှုရဲ့အသီးအပွင့်ကတော့ နောင်မှာ တောင်တော်ပုပ္ပါးကို စောင့်ရှောက်ကြရ မဲ့နတ်ဝိဉာဉ်များဖြစ်လာမဲ့ ယောက်ျားအမွှာ ကလေးများဖြစ်ကြပါတယ်။
မီးတောင်ဟောင်းရဲ့ထိပ်အထိ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ကျောင်းကန်တန်ဆောင်းများရှိနေတာကြောင့် ပွဲတော်ချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လဲခရီးသွားတွေက ပုပ္ပါးကိုလာကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့လဲ ပုပ္ပါးဘက်ကိုသွား ခဲ့ပါသေးတယ်။ တောင်ပေါ်တော့ မတက်ခဲ့ကြပါ။ တောင်ခြေမှာရှိတဲ့ အမျိုးသား ပန်းခြံဥယျဉ်ကို သွားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အသင့်အတင့်ဘတ်ချက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အသင့်အတင့်ဥယျဉ်ပန်းခြံပါ။ ဒါပေမင့် စိတ်အား ထက်သန်ကာ တာဝန်ကျေပွန်လှတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကူးစက်မိတဲ့အလား ကျွန်မတို့လဲ စိတ်ဝင်းစားလျက် ပညာတွေရခဲ့ကြပါ တယ်။
အမြင့်ပိုင်းဟာ ရာသီဥတု အထူးသာယာနေပါတယ်။ မီးတောင်မြေဟာ ရှားပါးတဲ့သစ်ပင်များနဲ့အပင်ငယ်များကို ထိန်းသိမ်းစိုက်ပျိုးဘို့ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသစ်ခွများနဲ့ လိပ်ပြာများလဲ ပေါများလှပါတယ်။ ဒီပန်းဥယျဉ်မှာ ဆေးဘက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ ဘယ ဆေးပင်များကို အထူးစိုက်ပျိုး ပါတယ်။ ဒီပန်းဥယျဉ်ဟာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ သုတေသနပြုဘို့အတွက် စံပြဖြစ်ပါတယ်။ လေဟာအေးမြပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့သစ်သားကုန်းပတ်ပေါ်ကနေ မီးတောင်ရဲ့ အံ့မခန်းရှုခင်းကို ကျွန်မတို့ခံစားရသလို စိမ်းလန်းတဲ့ရှုခင်း ကလဲ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များကို ဘဝင်ခိုက်ပီတိဖြစ်စေပါတယ်။
ပုဂံကို ဘယ်နှစ်ခေါက်ပဲလာလာ အသစ်အဆန်းတွေကိုတွေ့ရမှာကိုရော၊ စေတီပုထိုးများရဲ့မြို့တော်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုဖမ်းစားမဲ့ မှော်ဉ္စလက်ကိုတွေ့ရမှာကိုပါ ပုဂံမှာစတည်းချတဲ့လေးရက်အချိန်ဟာ သင့်ကိုအမှတ်ရစေမှာပါ။ သူ့ရဲ့ရိုးရာအနုပညာများနဲ့ လက်မှုပညာ များ၊ ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အိုးထိန်းသည်လုပ်ငန်း၊ ယွန်းထည်လုပ်ငန်း တွေဟာလဲ ဆွဲမက်စရာကောင်းပြီး အသုံးဝင်စရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ ပုဂံဟာ မြန်မာ့ယွန်းပညာရဲ့ ရေခံမြေခံအရပ်ပါ။ နည်းပညာဟောင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားလျက်ပါ။ ဒါပေမင့် နည်းပညာသစ်များကို ဖန်တီးဘို့ လိုအပ်ချက်ကိုလဲ သတိထားရှေ့ရှုနေကြပါတယ်။ တိုင်းတပါးက နည်းပညာကို ဆည်းပူးလို စိတ်ရှိနေကြပါတယ်။
အကြီးဆုံးယွန်းထည်လုပ်ငန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီး ဟာ မြန်မာ့ယွန်းပညာအတွက် တိုးတက်အောင်ကြံဆောင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းများကို ဂျပန်မှာသွားလေ့လာပါတယ်။
သမိုင်းပညာရပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရပ်၊ အနုပညာနဲ့ သဘာဝအလှအပများကို ပုဂံက များစွာပေးလျက်ပါ။ ဒါပေမင့် အရေးကြီးဆုံးက သူရဲ့ဌာနေပြည်သူများပါ။ ဂုဏ်ယူရတဲ့ မြို့တော်ဟောင်းရဲ့ဌာနေများရဲ့ လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ညင်သာသိမ်မွေ့မှုနဲ့ ပျူငှာဖော်ရွေ မှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတာတွေဟာ အံ့မခန်းစရာပါပဲ။
တနေ့ခင်းမှာတော့ ကျွန်မတို့ နေ့လည်စာအတွက် “သာရဘ – ၃” စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သစ်ပင်များအရိပ်အောက်မှာ
ခင်းကျင်းထားတဲ့ ရှည်လျားတဲ့ စားပွဲများနဲ့ထိုင်ခုံရှည်များရှိပေမင့် မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များအနက် တခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ “သာရဘ – ၁”ဟာလဲ ဒီအဆင်အပြင် အတိုင်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခုတော့ မူလနေရာကနေ ရွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ သစ္စာရှိဖောက်သည်များက တာ့ အခြားသစ်ပင်များအောက်မှာ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ “သာရဘ – ၂” ဆီ ဦးတည်သွားကြပါတယ်။ “သာရဘ – ၂”လဲ ရွှေ့ပြောင်းသွားပါတယ်။ ဖောက်သည်ဟောင်းများက “သာရဘ – ၃”ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ အလေးထားအားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။
သစ်ပင်များရဲ့အရိပ်အောက်ကစားပွဲခုံများပေါ်က ထမင်းတနပ်ဟာ လူတွေဘာကြောင့် ဒီဆိုင်ရဲ့အစား အစာနဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန် ဖော်ရွေမှုကို နှစ်သက်မက်မောနေရတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်စေပါ တယ်။ ငွေကျပ် သုံးရာ(အမေရိကန် ၅၀ဆင့်ထက်နည်းတဲ့ငွေ)နဲ့ ထမင်းမောက်မောက် တပန်းကန်၊ ချဉ်ပတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်ဖျော်ရည်စပ်စပ်၊ နှမ်းဖျော်ရည်ပြစ်ပြစ်၊ ငချဉ်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြုန်း စတဲ့ အရံဟင်းပွဲ ၅ ပွဲ ၆ ပွဲကိုအကြိုက်စားနိုင်ပါတယ်။ သာမန်စားသုံးသူတယောက်အတွက် လုံလောက်တဲ့ထမင်းတနပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသားနဲ့ငါးဟင်းပန်းကန်များကို စားပွဲများပေါ်မှာတင်ထား ပါတယ်။ အသားတုံး၊ ငါးတုံးများကို ကိုယ်ယူသလောက်ရှင်းရပါတယ်။
ပုဂံမှာနေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ရက်အနည်းငယ်ခရီးကို စာတအုပ်အဖြစ်ရေးနိုင်ပေမင့် ဒီအချိန်မှာရပ်နားလိုက်ပါ့မယ်။ အချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာထက် ပိုကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရမှာပါလဲ။
ဒါကြောင့်ကျွန်မ ရိုးရိုးလေးပဲပြောပါ့မယ် – “သာရဘ ၃”ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ သာယာကြည်နူးမှုကို သင် လာ ရောက်ပြီး အရသာခံကြည့်ကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အားလပ်ရက်အဖြစ် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခံစား ကြည့်ပါ – လို့။
၂၀၁၁-၁၀-၂၃ (မိုင်အိနိချိ၊ ဂျပန်)
( ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် မိုင်အိနိချိနေ့စဉ်သတင်းစာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Holiday-4 ကို ပြန်ဆိုပါ သည်)
It is an unhappy
coincidence that while I am in the process of writing about the days I spent in
Pagan, an entirely unheard of tragedy for Burma should have taken place in the
vicinity of the old capital. The murder ofaJapanese woman tourist by the
driver of her “motorbike taxi” shocked the people ofacommunity
widely known for hospitality to strangers. The crime sent shock waves across
the country andaman from the town of Nyaung-U, where the crime had been committed,
spoke for all of us when he said: “Suchaterrible thing has never
happened here before; we cannot understand it. We are not like that, we feel so
The murderer has been
apprehended and justice must take its due course, but the young woman will
never be restored to life. We send our deep condolences to all those who knew
and cherished her.
impermanent, nothing lasts forever. This is what Buddhism teaches us and what
Pagan teaches us. Yet it is surely not wrong to try to conserve what should be
conserved. Not far from Pagan is Popa, an extinct volcano, the most prominent
centre of spirit worship in the country. Its annual festival attracts not just
believers but tens of thousands of visitors eager to observe the rituals that
have been passed down through the ages since the time when the kings of Pagan
were lords of life and death over their subjects.
According to legend, back
in the days of King Anawratha, there lived on Mount Popaaflower-eating
ogress. A royal retainer with unusual powers would come every morning from
Pagan at superhuman speed to gather flowers for the king. As might be expected,
he met the ogress, who had the power to make herself look beautiful, and fell
in love with her. The fruit of the union between the superman and the ogress
were twin boys who would one day become the guardian spirits of Popa.
Tourists make the trip
out to Popa even when it is not festival time as there are interesting shrines
all the way up to the top of the volcano. We too went out towards Popa but not
to climb it. We went to visit the National Park in the foothills. It is of
modest size and obviously works onamodest budget but the enthusiasm and
dedication of the staff was contagious and our visit was both interesting and
The raised altitude makes
the climate particularly pleasant and the volcanic soil is ideal for the
preservation and cultivation of rare trees and plants. Exotic orchids and
butterflies abound and the Park specializes in medicinal vegetables and herbs.
It is an ideal setting for both conservation and research. The air was cool and
there wasaspacious wooden deck from which we could enjoyamagnificent view
of the volcano and of green vistas that would send botanists into ecstasies.
Four days in Pagan is
long enough to make you realize that however many times you may come back there
would be new discoveries to be made, new magic that would hold you captive to
the fascination of the city of pagodas. Its traditional arts and crafts,
basketwork, pottery, lacquer ware, are attractive as well as useful. Pagan is
in fact the home of Burmese lacquer. The old methods and designs have been
retained but there is also an awareness of the need to strike out in new
directions. There is an eagerness to learn from other countries and the owner
of one of the largest lacquer stores had spent some time in Japan to see if she
could find ways of improving the quality of Burmese lacquer.
Pagan has much to offer
in the way of history, architecture, art and the beauties of nature. Its
greatest asset however is its people. Gentle and courteous as befits the
inhabitants ofaproud old city, their charm is as memorable as their
surroundings are unique. One afternoon we went to have our lunch at ‘Tharaba
3.’ This is just several long tables and benches laid out underafew shade
trees but it is one of the most popular eating spots in town. Tharaba 1 had
been arranged inasimilar way and had had to move away from its original
place. The demands of loyal clients had led to Tharaba2reappearing under
other trees. When Thraba2also had to move, the clientele remained staunch and
Tharaba3materialized.
One meal at those tables
under the trees makes you understand why those who have enjoyed the food and
hospitality of Tharaba keep coming back for more. Three hundred kyats (less
than U.S. 50 cents) gets youabig helping of rice and as much as you want of
some five or six side dishes such as pickles, thick spicy tomato sauce, sesame
mush, fermented fish and vegetable fritters. For an average eater, that constitutes
an adequate meal. Dishes of meat and fish are also placed on the tables; you
pay only for the pieces that you put on to your plate.
book about my few days in Pagan but it is time to stop and what could be better
than to end onaculinary note? So I will simply say: you must come and taste
the simple delights of Tharaba3andaholiday in Burma for yourself.
(Mainichi Japan) October 23, 2011
အားလပ်ရက် – ၃
ပုဂံမှာ တတိယမြောက်သွားဖူးခဲ့တဲ့ဘုရားကတော့ သဗ္ဗညုစေတီဖြစ်ပါတယ်။ စေတီတော်ရဲ့ သဟဇာတမျှတဲ့ အချိုးအစားနဲ့ လှေခါးထစ်အထပ်အလွာများဖြင့် ရှေးဟောင်းဘာသာရေးအ ဆောက်အဦးများတွင် အမြင့်မား ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ အသပ္ပါယ်ဆုံးစေတီများအနက် စေတီတဆူလဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအထိ ဘုရားဖူးများကို စေတီတော်ရဲ့အထပ်အလွှာများ ပေါ်တက်ကာ အတုမရှိတည်ငြိမ်မှု ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ပုဂံရဲ ငြိမ်းအေးသာယာခြင်းကို ငုံ့ကြည့်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
‘ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ဘူးပြီ’လို့ဖော်ပြနိုင်တဲ့ဓါတ်ပုံများအတွက် တိကျတဲ့နေရာတခုပါပဲ။ ကျွန်မနုစဉ်အချိန်တွေတုန်းက ဒီအလွှာအထပ်များရဲ့အဆင့်တခုပေါ်မှာ မောင်နှမဝမ်းကွဲတယောက်နဲ့
ဦးလေးတယောက်နဲ့အတူ ထိုင်ရင်း ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ဘဝကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာ ကြည့်မြင်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့အလို့ငှာ ဒီအထပ်အလွှာများပေါ် တက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အချိန်မှစပြီး သဗ္ဗညု စေတီတော်ကိုလာရောက်ဖူးမျှော်သူ အရေအတွက် သိသိသာသာလျော့ကျသွားခဲ့ ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင် စေတီတော်မှာ ဥပက္ခအပြုခံနေရပြီး လှပသပ္ပါယ်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်လာရန်အတွက် စောင့်မျှော်နေရတဲ့ ကြေကွဲတမ်းတနေပုံ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
အတွင်းနံရံများအပေါ် ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုတ်ထားတဲ့ထုံးရည်များအောက်မှာ ရှေးရေဆေးပန်းချီများရှိနေပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို အနုပညာပြန်လည်မွမ်းမံမှုကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ပြုပြင်ပေးရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာ အနည်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ အဆောက်အဦးတခုအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဘွယ်ရာ အခြေအနေ မျိုးပါပဲ။
ပုဂံနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းမှုတွေ အများကြီးလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးတွေကပဲ စပြောရမှာပါပဲ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတွင်းက ပြန်လည်မွမ်းမံရေး လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဟာ အထူးကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများမပါရှိပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှုထက် အမြန်ဆုံးပြီးစီးမှုကို ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံကို အခုအနေအထားနဲ့တွေ့မြင် ရတိုင်း မျက်ရည်စို့ရတဲ့ ငိုယိုခဲ့ကြရတဲ့ အနုပညာနဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသန ကိုသူမြတ်နိုးသူများရှိနေကြောင်းကို ကျွန်မသိခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမင့် စေတီပုထိုးလွင်ပြင်ကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်ဘို့ အလောတကြီးလုပ်ဆောင်မှုရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံနေရတဲ့ မြတ်နိုးဘွယ်ဘုရားကျောင်းကန်များရဲ့ မူရင်းစစ်မှန်မှုကို
ဂရုစိုက်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ရနိုင်ခြေရှိနေပါသေးတယ်။ စေတီငယ်များစွာဟာ တာရှည်ပစ်ထားခံရတဲ့ ယိုယွင်းမှုရဲ့ ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်လို့
ဆိုရမှာပါ။ ဒါတွေကိုလဲ မူလအခြေအနေအတိုင်း နီးနီးစပ်စပ် တူအောင်ပြန်လည်မွမ်းမံရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ရဲ့မျက်မြင်သမိုင်းအသွင် ပျက်စီး မှုအဆင့်ဆင့်များကို မြို့တော်ဟောင်းပေါ်မှာ ပုံဖော်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရမှာပါ။
အထူးကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ကိစ္စရပ်များရှိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမင့် သူတို့လုပ်ငန်းများမစခင်မှာ ပုဂံကိုကာကွယ်ရန်နဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း လှုံ့ဆော်သတိပေးရေး ကို ကျွန်မတို့ မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့အထင်ကရသမိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်ရုံမက ကမ္ဘာ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် တစိတ်တပိုင်းဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများသာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခံမှုနဲ့ကာကွယ်မှုရယူဘို့လိုအပ်တာမဟုတ်ပါ။ ပုဂံတဝိုက်ရှိ ဒေသတခုလုံးက အချစ်အခင် အမြတ်အနိုးခံဘို့ အထိန်း သိမ်း အစောင့်အရှောက်ခံဘို့ ငိုကြွေး တမ်းတနေကြတာပါ။
တနာရီ ကားစီးသွားတော့ ဒေသရဲ့နောက်ဆုံးအကြွင်းအကျန်ဖြစ်တဲ့ အင်ကြင်းတောကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြမ်းတမ်းမှုအလယ်မှာတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ‘အိုအေစစ် ပေါ့။’ အင်ကြင်း(Pentacme-siamensis)ဟာ ထူးခြားဆုံးသစ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းရင့်ချိန်မှာ သေဆုံးသွားပေမင့် သူ့ရဲ့အသားဟာ ဆွေးမြေ့သွားရမဲ့အစား ကျောက်သားပြင်လိုအရာဝတ္ထု အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဥပဒေက ထိုဒေသမှာ သစ်ခုတ်လှဲခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမင့် သစ်ပင်များဟာ အာမခံချက်နည်းပါးလျက်ပိန်လှီနေတဲ့အသွင်ဆောင် နေကြပါတယ်။ သန်မာတဲ့ ပင်ပျို များပေါက်ရောက်တဲ့အထောက်အထားလဲ မရှိသလောက်ပါပဲ။
သစ်တောသစ်ပင်အုပ်ကိုလေ့လာတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှာ စာနယ်ဇင်းသမား အယောက် ၂၀ ခန့်ပါဝင်ပါတယ်။ ပုဂံကိုလာခဲ့တဲ့အားလပ်ရက်မှာ သီးသီးသန့်သန့်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မမြော်လင့် မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမင့် ဒီလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ လက်ရှိအခြေအနေရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အတွက် စာနယ်ဇင်းသမားများကိုလဲ ကျွန်ုပ်တို့ အုပ်စုရဲ့ တိုးချဲ့အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ကျွန်မ သတ်မှတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုသဘောထားလိုက်ခြင်းဖြင့် သူတို့တ တွေဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးကာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြံအစည်က သစ်တောအတွင်း ချောင်ကျကျတနေရာမှာ အေးဆေးစွာ နေ့လည်ပျော်ပွဲစားတခု တည်ခင်းဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမင့် ကျွန်မတို့ အဲဒီနေရာကိုရောက်တော့ ကျွန်မတို့ကိုတွေ့ဘို့လာတဲ့ ရွာနီးချုပ်စပ်ကလာတဲ့ လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒိရွာကလေးဟာ ကဗျာဆန်တဲ့ “ဇီးအို-သစ်လှ-နတ်ထိန်း-အင်ကြင်းတော” အမည်ကို ဆောင်ထားပါတယ်။ အဲဒါဟာ ‘ဟိုက်ခု’ကဗျာလေးလိုပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ဒီရွာလေး ဟာ ဆက်နွယ်မှုရှိနေတာက်ို မမြော်လင့်ပဲတွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးများကို သူတို့ရွာရဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာဟာ ဘာပါလဲလို့ကျွန်မမေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့က”ရေ”လို့ ပြန်ဖြေကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အကြာက Bridge Asia Japan ကုမ္ပဏီက သူတို့အတွက် အဝီစိ တွင်းတခု တူးပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ယခင်ကထက်ကောင်းမွန်အဆင်ပြေနေကြာင်း သူတို့က ဆက်ပြောပြ ကြပါတယ်။ ဒါပေမင့် ရေတွင်းအနီးဝန်းကျင်မှာ မနေထိုင်သူတို့ကတော့ အတော်အလှမ်းကွာကွာ လမ်းလျှောက် ပြီး နေ့စဉ် ရေလာခပ် နေရကြောင်းလဲ ပြောပြကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေစုတ်တင်စက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီဘိုးကိုလဲ သူတို့ပေးကြရကြောင်း၊ အဘိုးအခမှာ သင့်တင့် လျောက်ပတ်ပေမင့်၊ ထန်းပင်ကိုမှီခိုအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုနေကြရတဲ့ ရွာသူရွာသားများအဘို့တော့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေရကြောင်းလဲ ပြောပြကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းရဲ့ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုမှာ ထန်းပင်များ ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ ဖျာများ၊ ခြင်းတောင်းများယက်လုပ်နိုင်တဲ့ ယပ်တောင်ပုံအရွက်များနဲ့ စားသောက်နိုင်တဲ့ ထန်းသီးများ ထန်းပင်ကရရှိကြ ပါတယ်။ ဒါပေမင့် ထန်းပင်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးထွက်ကုန်ကတော့ သူ့ရဲ့ချိုမြတဲ့ “ထန်းရည်”ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လဲ သောက်သုံးနိုင်ပါ တယ်။ အချဉ်ဖောက်ပြီးလဲ ကျေးလက် အရက်ဖြစ်တဲ့ “ထန်းရည်” အဖြစ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျိုချက်ပြီးလဲ နှစ်လို့ဘွယ်ကောင်းတဲ့ ထန်းလျက်များအဖြစ်လဲ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းသူဘဝတုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ ထန်းတက်သမားများရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝအကြောင်းစပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ၁၂ ရာစုက ကဗျာတပုဒ်ကို ကျွန်မတို့ အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အန္တရယ် များပြီးပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ကို နံနက်ခင်းမြူခိုးဝေချိန်မှစခဲ့ကြရတဲ့ နေ့စဉ်ကျင်လည်ရတဲ့သရုပ်ဖော်ချက်ကို ပြတ်သားထင်ရှားစွာ ယနေ့အချိန် အထိသက်ဝင်ကျန်ရှိနေပုံများကို ရွာမှအမျိုးသားများနဲ့စကားပြောခဲ့ရလို့ ကျွန်မသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်များစွာက သူတို့ဘိုးဘေးများ လှမ်းလျှောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း သူတို့တတွေဟာလွဲ မဆုတ်မနစ်တဲ့ ဇွဲလုံလနဲ့ အလုပ်စက်ဝန်းကို ကျင်လည်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေ ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ “ဇီးအို-သစ်လှ-နတ်ထိန်း-အင်ကြင်းတော”ရွာက ထန်းတက်သမားတွေထဲမှာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ များ ရှိနေပါပြီ။
မိုင်အိနိချိသတင်းစာ – ဂျပန်
၂၀၁၁ ခု စက်တင်ဘာလ ၂၆
(၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် ဂျပန်နိုင်ငံ မိုင်အိနိချိ နေ့စဉ်သတင်းစာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ HOLIDAY-3 ကိုမြန်မာပြန်ဆိုပါသည်)
၂၀၁၁ ခုစက်တင်ဘာ ၂၆
Letter from Burma: Holiday 3
The third temple where we went to worship in Pagan was That-byin-nyu. The highest of the ancient religious monuments, it is also one of the most beautiful, with its harmonious proportions and tiered terraces. Until the 1990s, visitors were allowed to climb up to the terraces and look down on the serenity of Pagan as it spread out in inimitable stillness. It wasaperfect spot for “I’ve been there” photographs, and I have several of my young self sitting on one of the terraces withacousin and an uncle, all of us looking very pleased with ourselves and with life in general. Since climbing up to the terraces has been disallowed in the interests of conservation, the number of visitors who come to That-byin-nyu has dropped dramatically, and the temple now has the wistful air of neglected beauty waiting to be rediscovered. Behind the rough lime wash on the inner walls are murals which might still be saved by skilled art restorers. Maintenance is obviously kept toaminimum,alamentable state of affairs forabuilding that is of so much cultural and historical significance.
There is so much that needs saving in Pagan and its environs. To begin with, the monuments themselves: the restoration work carried out in the 1990s was undertaken without the benefit of expert advice and with quick results, rather than excellence, in mind. I am told there are lovers of art and archaeology who weep every time they see Pagan in its present state. However, with care and expertise it should still be possible to recover the authenticity of the lovely old temples that have been spoilt byahasty drive to turn the plain of pagodas intoatourist magnet. Many small temples remain in what one might say isafortunate state of disrepair; these might yet be restored toaclose semblance of their original condition or preserved in varying stages of ruin asavisual history of the ravages time has wrought on the old city. These are matters for specialists, but before their work can begin we will have to promote an awareness of the need to protect and preserve Pagan not just as an important landmark in the history of our country, but as part of the cultural heritage of the world.
It is not only the ancient monuments which are in need of care and protection. The whole land around Pagan cries out to be cherished and conserved. An hour by car took us to the last remaining patch of ingyin forest in the region,agallant oasis amidst the harshness of its surroundings. The ingyin (Pentacmesiamensis) isamost unusual tree; when it dies of old age, its wood, instead of rotting away, petrifies intoastone-like substance. Conservation laws forbid logging in the area, but there isascrawny look to the trees that is less than reassuring, and there is little evidence of strong new growth.
Our expedition to the forest grove included some twenty journalists. I had hoped our holiday in Pagan could be kept quite private, but it had not turned out that way, and making the best of the circumstances I had decided to look upon the journalists as an extended part of our group. It helped that they were all friendly and cooperative. Our plan was to haveaquiet picnic lunch inasecluded part of the forest, but when we arrived there we found thatalarge number of people fromanearby village had gathered to meet us. This village bears the poetic name of Zee-O Thit-hlaNat-hteinInngyin-taw: “Old Plum, Beautiful Wood, Retainer of the Gods, Ingyin Forest.” It is almostahaiku.
There is an unexpected link between Japan and this little village. When I asked the women what the greatest need was for their village, they replied, “water.” They went on to explain that Bridge Asia Japan had dug an artesian well for themafew years ago so they were much better off than they had been in the past, but those who did not live in the vicinity of the well had to walkafair distance everyday to fetch water. Moreover, they had to pay for the cost of the diesel oil needed to operate the pump, and although the charge was reasonable, it wasaburden for most of the villagers, who eke outaspare living from the palmyra palm, commonly known as the “toddy” palm. The palmyra thrives in the hot, dry climate of central Burma and provides fan shaped leaves, which can be used to weave mats and baskets, and an edible fruit. Its most important product, however, is its sweet sap that can be taken asarefreshing drink, fermented to makeastrong country spirit (“toddy”), or boiled to produceadelectable brown sugar candy.
Asaschoolgirl I learnt of the hardships of palm climbers fromafamous poem of the twelfth century that we had to commit to memory. The description of the daily round of those who start out into the early morning mist to begin their dangerous (falls are frequent and can lead to serious injuries) and exhausting work is sharp and vivid and remains valid to the present day, as I discovered from talking to the men of the village. They are treading the same relentless round of work that their forebears trod centuries back. However, there is one significant difference: today, among the palm climbers of Old Plum, Beautiful Wood, Retainer of the Gods, Ingyin Forest Village, there are university graduates. (By Aung San Suu Kyi)
Bagan Hotel (Riverview) truly does provideamagnificent view of the Irrawaddy flowing
lazily along the western boundary of the lush grounds. Although well into the
monsoon season, there was just one fleeting shower (the merest drizzle, really)
during the four days we spent in Pagan and every evening we enjoyed the
splendid sunsets for which the ancient capital is famous. From the verandah of
our bungalow we would watch the red disc slide down ataregal pace, tinting
the sky with impossible vermilions and oranges and yellows and lighting up
fantastic cloud profiles before sinking behind the mauve and indigo hills that
smudged the opposite bank of the river. It wasatravel brochure photograph
Much has been written by scholars, specialists and casual visitors about the
romance and wonder of Pagan. The scrubby plain is dotted with thousands of
religious structures (the archaeological department lists more than 3,000,
including the remains of very small edifices) of all sizes, each one, from the
largest to the smallest, crowned with an apex rising towards the sky, the
architectural expression ofayearning for something higher than mere material
achievement. I can only add my personal impressionist gloss toapicture that
has been painted too often to require an accurate reproduction. At twilight the
city of pious intent is removed by deepening shadows toadim realm that is
neither in the past nor in the present. The great majority of the smaller
monuments are in varying stages of ruin and serve as an illustration of
impermanence and decay and the crumbling of illusion, lessons appropriate not
only inaBuddhist land but in any part of the earth where the powerful and the
proud have tried to leave an ineradicable print of their authority and
splendor. Pagan is evocative of vanished glory and lost civilizations and the
pathetic arrogance of man so well depicted by the stony sneer of Ozymandias
lying in colossal pieces in the endless desert sands: “Look upon my works,
How many of the kings and queens and princes and courtiers of Pagan who have
left evidence of their apparent religious fervor in brick and mortar genuinely
sought to free themselves from the bondage of samsara? How many aspired merely
to prove their material worth in this world by the construction of costly
monuments? How many viewed such works as an insurance policy that would
guarantee their comfort throughout the cycles of existence because their minds
shied away from encompassing the concept of nirvana?
The list of kings who ruled Pagan is long indeed but only one has ever captured
my imagination: Kyansittha, whom the history books of my childhood said was the
son of King Anawratha, the monarch credited with the first unification of
Burma. Scholastic research however suggests that the two kings were not related
by blood. Kyansittha was perhapsacommoner but he was uncommonly gifted. A man
of courage and daring, he rose to beageneral of the royal troops and became a
popular hero. It is very likely he aroused the jealousy of the old king who
seemed to have feared him asapossible usurper. When Anawratha died he was
succeeded byaweak and incompetent son whose reign was very short. It must be
assumed that no heirs of Anawratha’s line remained for Kyansittha’s subsequent
ascension to the throne was unchallenged.
Kyansittha proved to be an intelligent, able and compassionate king and the
Ananda temple that he built reflects an attractive personality. Gracefully
proportioned and engineered to provide both light and shade, it is beautiful in
structure as in concept. To visit the Ananda is as much to pay homage toarare
ruler as to contemplate on the spiritual legacy represented by the unusual
images of the Buddha that it houses.
The hotel grounds offered usawonderful surprise in the form of two more
temples, practically unknown, also attributed to Kyansittha. We were told that
one was built at the beginning of his reign in thanksgiving for the victories
he had achieved over his enemies while the other was an offering made towards
the end of his life in atonement for the many acts of violence he had committed
asawarrior. The modest sized structures, tucked in the garden near the dining
terrace where traditional harp music is played every evening, have the air of
private chapels and to light candles there in the quiet dusk isadifferent
experience from praying in the big and famous temples.
My son and I had decided that we were not going to rush around all the old
monuments apart from the Ananda and the little temples of King Kyansittha
within the hotel grounds, we only visited two other temples, That-byin-nyu and
Manuha. The latter hasaspecial significance because it is generally held to
have been built byacaptive Mon king, Manuha. This long accepted history is
now disputed by some scholars but it cannot be denied that the temple seems
deliberately designed to create the heavy atmosphere of freedom deprived. The
images of the Buddha are disproportionately large for the available space and
produce in the visitorasensation of claustrophobia, of the strained breathing
ofasoul longing to be free. To worship there is to be aware of two great
needs for our country: the need to weave harmony between the different ethnic nationalities
and the need to achieve the release of all political prisoners. There can be no
holiday from such awareness. (By Aung San Suu Kyi)
စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ကုန်းမြေရဲ့ အနောက်ဘက်နယ်ခြားတလျှောက် လေးတွဲ့စွာစီးဆင်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အံ့မခန်းမြင် ကွင်းကို
ကျွန်ုပ်တို့ ပုဂံတွင် လေးရက်နေထိုင်စဉ်မှာ မုတ်သုန်ရာသီတွင်း ကောင်းစွာချဉ်းနင်းဝင်ရောက်နေသော်လဲ မိုးဖွဲလေး(အမှန်တကယ်ကိုအဖွဲဆုံးလေး) တကြိမ်ပဲ ရွာခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ဟောင်းအတွက် ကျော်ကြားစေခဲ့တဲ့ ရှုမောဘွယ်ရာ နေဝင် ဆည်းဆာများကို ညနေတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ခံစားပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။
နေဝန်းနီကြီး တော်ဝင်ခြေလှမ်းများဖြင့် လျှော်ကျသွားနေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘန်ဂလိုရဲ့ဝရံတာကနေ ကြည့်မြင်ရပါတယ်။
တဘက်မြစ်ကမ်းကိုညှို့မှိုင်းနေစေတဲ့ မရမ်းနုရောင်နဲ့ မဲနယ်ပြာတောင်တန်းများနောက်ကွယ်မှာ လျှိုးဝင်မပျောက်ကွယ်ခင်မှာ ကောင်းကင်ကို အပြောရခက်တဲ့ ဟင်္သာပြဒါးရောင်များနဲ့ လိမ္မော်ရောင်များနဲ့ အဝါရောင်များဖြင့် ရောင်ခြယ်လျက် အံ့ဘွယ်တိမ်ကောက်ကြောင်းများကို အရောင်လင်းလက်စေပါတယ်။ ဒါဟာ ခရီးသွားလက်ကမ်းကြော်ငြာမှဓါတ်ပုံကို အသက်ဝင်စေခဲ့တာပါ။
ပုဂံရဲ့ကြည်နူးဘွယ်အချစ်ဇာတ်ကြောင်းများနဲ့ အံ့မခန်းဘွယ်ရာများကို ပညာရှင်များ၊ အထူးပြုလေ့လာသူများနဲ့ ထသွားထ လာဧည့်သည်များက ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ခြုံနွယ်သစ်ပင်များလွှမ်းတဲ့လွင်ပြင်မှာ အရွယ်အစားစုံ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ (ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက ဗိမာန်အသေးများရဲ့ အကြွင်းများ
အပါအဝင် ၃ ထောင်ကျော် စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။) အကြီးဆုံးမှ အသေးဆုံးအထိ တခုချင်းစီမှာ ကောင်းကင်ကို ထောင်တက်နေတဲ့ ထိပ်ဦးပိုင်းများ ဆောင်းထားကြပါတယ်။ ဒါဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖန်တီးမှုဖြစ်ရုံထက် ပိုမိုမြင့်တဲ့အရာ တခုကို လွမ်းမောတမ်းတခြင်းရဲ့ ပိသုကာပညာဆိုင်ရာဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။
တိကျတဲ့ပုံတူပွါးကိုရရန် မကြာခဏမခြယ်သတဲ့ပုံမှာ ကျွန်မရဲ့ ပုဂ္ဂလိကစိတ်ခံစားမှုကို အသေးစိတ်မခြယ်မှုန်းပဲ ဆေးရောင်
အလင်းအရောင်တောက်ပခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ညနေဆည်းဆာချိန်မှာ အလားအလာမရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက် မြို့တော်ကို အတိတ်မှာရော အနာဂတ်မှာမရှိတဲ့ မှေးမှိန်တဲ့လောကမှာ အရိပ်များနက်ရှိုင်းစေမှုဖြင့်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
အဆောက်အဦးငယ်များစွာတို့ဟာ ပျက်စီးမှုအဆင့်ဆင့်မှာရှိနေပါတယ်။ အမြဲမတည်ရှိခြင်းနဲ့ ဟောင်းနွမ်း ဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့
အယူမှား အယုံမှားခြင်း အကျေအမွများရဲ့ သရုပ်ဖော်ချက်များအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဒေသတွင်သာမက တန်ခိုးထွားသူများနဲ့ ဝါကြွားလိုသူများ သူတို့ရဲ့အာဏာပိုင်ခြင်းနဲ့ ဂုဏ်ဒြဗ်များကို ဖျက်မရနိုင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်များအဖြစ် ကျန်ရစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းမှာမှ မလျော်ကန်တဲ့သင်္ခန်းစာ များကိုလဲလှစ်ပြနေပါတယ်။
ပုဂံဟာ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဂုဏ်ရောင်၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူတို့ရဲ့သနားစဘွယ် မာနတရားများကို ဖော်ညွှန်း နှိုးထနေပါတယ်။ အဆုံးမဲ့သဲကန္တာရသဲများတွင် ကြီးမားတဲ့အပိုင်းအစများအဖြစ် လဲလျောင်းနေတဲ့ အိုဇီမဲန်ဒီယား ရဲ့ အေးတိအေးစက် နိုင်တဲ့ သရော်လှောင်ပြောင်ချက်ဖြင့် ကောင်းစွာဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်ရဲ့အလုပ်များနဲ့ မြော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းများကိုကြည့်ပါ – အိုဘုရားသခင် – ”
သူတို့ရဲ့ ထင်ရတဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုသက်သေအဖြစ် အုတ်များနဲ့အင်္ဂတေသရွတ်များဖြင့် စေတီပုထိုးများတည်ခဲ့ကြတဲ့ ပုဂံရဲ့ ဘုရင်များ၊ မိဖုယားများ၊ မင်းသားများ၊ နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသား ဘယ်နှစ်ပါးဟာ သံသရာအနှောင်အဖွဲ့က အမှန်တကယ်လွတ်မြောက် အောင် ရှေ့ရှုကြပါသလဲ။
တန်ဘိုးကြီးအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာမှာ သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတန်ဘိုး သက်သေပြရုံမျှ ဘယ်နှစ်ယောက် စိတ်ပါဝင်စား ခဲ့ပါသလဲ။
အဲဒီအလုပ်တွေဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအယူအဆလွှမ်းခြုံမှုမှ သူတို့ရဲ့စိတ်များက ကြောက်ရွံ့ဖယ်ရှောင်နေတာကြောင့် အသက်ရှင်နေတဲ့သံသရာတလျှောက် သူတို့ရဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိနေမှုကို အာမခံတဲ့ အာမခံပေါ်လီစီအဖြစ် ဘယ်နှစ်ယောက် ကြည့်မြင်ခဲ့ပါသလဲ။
ပုဂံကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းများရဲ့စာရင်းဟာ အမှန်တကယ်ရှည်လျားလှပါတယ်။ ဒါပေမင့် မင်းတပါးတည်းကသာ ကျွန်မရဲ့
အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကလေးဘဝမှာ သမိုင်းစာအုပ်များက ကျန်စစ်သားမင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးစည်း ရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့တဲ့ဘုရင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တပါးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမင့် ပညာရှင်များရဲ့သုတေသနကတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ သွေးမတော်စပ်ကြောင်းဖော်ပြကြပါတယ်။
ကျန်စစ်သားမင်းဟာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမင့် ထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင် ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ သတ္တိဗျတ္တိနဲ့ရဲရင့်သူပါ။ တော်ဝင်တပ်မတော်ရဲ့စစ်သေနာပတိဖြစ်လာကာ ထင်ရှားတဲ့ သူရဲကောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုရင်အိုကြီးအနော်ရထာက သူ့ကိုအာခံတော်လှန်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူလို့ မနာလိုမရှုစိမ့်ဖြစ်တာခံရပုံရပါတယ်။ ဘုရင်အနော်ရထာ
နတ်ရွာစံ ပြီးနောက် ပျော့ညံ့အရည်အချင်းမရှိတဲ့သားတော်က အရိုက်အရာဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သက်တမ်းဟာ
အလွန် တိုတောင်းလှပါတယ်။ အနော်ရထာရဲ့အရိုက်အရာခံဘို့ ကျန်စစ်သားမင်းသားရဲ့ထီးနန်းသိမ်းဘိသိက်ခံရေးကို
ကျန်စစ်သားမင်းဟာ ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့၊ စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့ အကြင်နာဂရုဏာတရားကြီးမားတဲ့မင်းတပါးအဖြစ် သက်သေခံပါတယ်။ သူတည်ထားခဲ့တဲ့ အာနန္ဒာဘုရားဟာလဲ သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှု ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေစေပါတယ်။ အလင်းအမှောင်နှစ်ခုစလုံး အားကောင်းအောင် ကျက်သရေရှိရှိ အချိုးကျ တည်ဖွဲ့ထားလို့ လှပတဲ့အဆောက် အအုံအဖြစ် သဘောထားယူဆရပါတယ်။ အာနန္ဒာစေတီကိုဖူးမျှော်ရတာဟာ ရှားပါးတဲ့ဘုရင်တပါးကို ကန်တော့ရသလို စေတီအတွင်းရှိ ထူးခြားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဟာ ဘာသာရေးအမွေအဖြစ်ကိုယ်စားပြုထားတာပါလားလို့ လေးလေးနက်နက် ချင့်ချိန်စဉ်းစားမိစေပါတယ်။
ဟိုတယ်မြေပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရင်သပ်ရှုမောဘွယ် အံ့သြခြင်းအဖြစ်နဲ့ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကို ရည်စူးတည်ထားကိုး ကွယ်တဲ့ စေတီနှစ်ဆူကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကို မထင်မရှား လူသိမများတဲ့စေတီများဖြစ်ပါတယ်။ တဆူကတော့ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးအုပ်ချုပ်စချိန်မှာ သူရဲ့ရန်သူများအပေါ်အောင်မြင်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုရည်စူး တည် ထားတာလို့ ကျွန်မတို့ကိုပြောပြပါတယ်။ အခြားတဆူကတော့ စစ်ဝါဒီတယောက်အနေနဲ့ သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်ခဲ့မှုများမှ ကြေရာကြေကြောင်းအတွက် သူ နတ်ရွာစံခါနီးမှာ တည်ထားပေးထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
စားသောက်ဆောင်အနီး ဥယျဉ်ထဲမှာတော့ သင့်တင့်တဲ့အရွယ် အဆောက်အအုံများရှိပါတယ်။ အဲဒိနေရာများမှာ ညနေ တိုင်း
ရိုးရာစောင်းဂီတသံများဖြင့်တီးခတ်ဖျော်ဖြေကြပါတယ်။ သီးသန့်ဘုရားရှစ်ခိုးဆောင်များရဲ့အနံ့အသက်များရရှိပါတယ်။ ယင်းတို့တွင် ဆိတ်ငြိမ်ညနေဆည်းဆာမှာ ဆီးမီးဖယာင်းတိုင်များ ထွန်းညှိပူဖော်ကြရတာ ကြီးမားထင်ရှားတဲ့ ဘုရား ကြီးများမှာ ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရမှုနဲ့
ကျွန်မရဲ့သားနဲ့ကျွန်မတို့ဟာ အဆောက်အဦးဟောင်းများကို ကတိုက်ကရိုက်လျှောက်မကြည့်တော့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီး၊ ဟိုတယ်ပရဝဏ်တွင်းရှိ အာနန္ဒဘုရားနဲ့ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ စေတီငယ်များအပြင် အခြားစေတီနှစ်ဆူဖြစ်တဲ့ သဗ္ဗညုနဲ့
မနုဟာဘုရားများကို သွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ကြပါတယ်။ မနုဟာစေတီကတော့ အကျဉ်းခံ မွန်ဘုရင်မနုဟာမင်း တည်ထားခဲ့တယ်လို့ အများကယေဘူယျယူဆထားတာမို့ တမူ ထူးခြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကာလကြာရှည်လက်ခံထားတဲ့သမိုင်းမှာ ပညာရှင်များ အငြင်းပွားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမင့် ဒီစေတီဟာ တားဆီးပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ လွတ်မြောက်မှုရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ခံစားမှုဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဘို့ တမင်္ဂလာပုံစံဖော်ဆောင်ထားပုံရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဟာ ရရှိတဲ့နေရာနဲ့ အချိုးမကျစွာ အလွန်ကြီးမားနေပါတယ်။ ဖူးမျှော်ရတဲ့ဧည့်သည်မှာတော့ ပိတ်လှောင်ကြောက်လွန် စိတ်ရောဂါ၊ လွတ် မြောက်လိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်မှုရဲ့ အသက်ရှူမွန်းကျပ်ခြင်းကို ခံစားဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဤသို့ဖူးမျှော်ရခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်ကြီးနှစ်ခုကို သတိရစေပါတယ်။ “မတူကွဲပြားနေကြတဲ့ လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားများအတွင်း သဟဇာတမျှ မှုကို ယှက်နွယ်ယက်ဖောက်ပေးဘို့ လိုအပ်ချက်” နဲ့ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ဘို့ ဆောင်ရွက်ပေးရမဲ့ လိုအပ်ချက်တို့”ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အသိတရားသတိထားနိုင်မှုမှ အားလပ်ခြင်းဆိုတာ မရှိနိုင်ပါ။
၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၂၂
( ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၂၂ နေ့ထုတ် မိုင်အိနိချိ နေ့စဉ်သတင်းစာပါ Letter from Burma: Holiday (2) ကို မြန်မာပြန်ဆိုပါသည် )
For many years now, holidays for me have been memory snapshots of past
events, vivid but distant.
The Himalayas: riding up and upamountain path through lichen festooned
forests on the back ofastately mule with seductively long lashes; sitting
down onagrassy slope looking down at misty, shadowy lands, eatingalunch of
hard boiled eggs and parched rice; wandering from Buddhist monasteries to Hindu
temples in Kathmandu, then ending up inasmall coffee shop famous for its
American brownies; shooting the rapids onaraft; sightingatiger from the
back of an elephant while munching sour Indian gooseberries plucked from wild
bushes; watching an enactment of the dance of death performed with mesmerizing
slow steps by Tibetan monks in the North East Frontier Area of India. In a
schloss overlookingaSwiss lake, enjoying delicious food of which the daily
highlight was homemade rosehip jam for tea. Onacanal boat meandering along
the waterways of England, family dog perched on the roof, surveying the green
views with absolute serenity. Camping on the empty sands of Tiree with the wide
Scots gray ocean stretching away to whereafew seals played.
The images are amazingly full of life and color but there isaquality of
unreality about each and every one. It was therefore unsurprising that when my
son Htein Lin (Kim) arrived on my birthday in June and said he was going to
take me away onaholiday it seemed to measomewhat unreal proposition.
After some discussion and thought however, I decided thatashort holiday,
the first in more than 20 years, was not unreasonable. So we set about
planning. With the full force of the monsoons at play the choice of the central
region of the country, the ‘dry zone,’ wasapractical one. There was Mandalay
from which the last king of Burma had been removed by British troops in the
late 19th century. Or there was Pagan, the ancient capital where some thousand
pagodas remain as witness to long vanished glory and raise tantalizing
questions as to the driving force behind suchamanifestation of excess
construction energy: was it piety or prosperity or pride or various
combinations of the three?
Pagan was the choice we made without any difficulty. The many temples and
stupas of the old city attract both tourists and pilgrims but during this time
of year there would be few visitors and we could enjoy some days of peace and
rest. Since this would not be the first visit to Pagan for either of us, we did
not intend to go around many of the religious monuments, we would only go to
the places that hadaspecial significance for me. The most important thing was
to findaplace where Kim and I and our dog Taichito (there was no question of
leaving him behind if this was to beafamily holiday) could be happy and
comfortable. The ideal place was found for us by U Khun Tha Myint. I shall have
to makeasmall diversion here.
U Khun Tha Myint is the younger brother of U Han Tha Myint,amember of the
Central Executive Committee of the National League for Democracy (NLD) party,
who was elected as the representative of the town of Butalin in the general
elections of 1990 with an overwhelming 80 percent of the votes cast. Ko Han Tha
and Ko Khun Tha’s father and my father became friends and associates when they
started the politicization of the Rangoon University Students’ Union in the
1930s. The politics of U Thein Pe Myint and my father were not always in
harmony and it could be said that toward the last phase of the independence
movement they were more adversaries than friends.
Yet they both left behindalegacy of respect for differing views and of
freedom from prejudice and resentment that has enabled us, their progeny, to
work together as colleagues and comrades bound together by shared values and,
not to be underrated,ashared sense of humor.
Ko Khun Tha came forward to help me when I was in Insein Jail in 2009 and
in need of an architect to undertake the proposed renovations to my house.
After I was transferred from jail to house arrest the work on the house started
and Ko Khun Tha, as architect, and two other friends, Ko Htin Kyaw and Ko Ni,
as my appointed representative and my general supervisor, came daily over the
months necessary to complete the renovations. Ko Htin Kyaw and Ko Ni too are
connected to me through our respective fathers who had known one another at
Rangoon University. I shall write more about the sons and fathers (and mothers)
another time but suffice it to say here that asaresult of these old ties I
have been blessed with assistance, help and friendship. Ko Khun Tha who started
out as my architect has been obliged, willy-nilly, to take on the
responsibilities of security officer, dog trainer, emergency driver and, during
the last fortnight, travel agent and holiday organizer.
Ko Khun Tha’s choice of the Bagan Hotel for our group (there were 16 of us)
could not have been happier. It is within easy reach of some of the most famous
historical and religious monuments, it isaplace of comfort and beauty and,
most important of all, the staff are courteous and well-trained and possess a
special talent for making guests feel truly welcome and cherished. (By Aung San
Japan) July 19, 2011
အခုအချိန်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အားလပ်ရက်များဟာ ကျွန်မအဘို့ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များရဲ့ လျှပ်တပြက်ပုံရိပ်များအဖြစ်
ဟိမဝန္တာတောင်တန်းများမှာ- စွဲမက်စရာကျာပွတ်များနဲ့ အိနြေ္ဒရတဲ့မြည်းရဲ့ကျောကုန်းထက်မှာ စီးလျက် မှော်ကပ်ပင်များဖြင့် ပန်းဆိုင်းပန်းကုံးများသဖွယ်စီခြယ်ထားတဲ့ သစ်တောများရဲ့တောင်လမ်း တလျှောက်ကိုတက်လှမ်းခဲ့တာ၊ မြက်များထူတဲ့ တောင်စောင်းမှာထိုင်ရင်း မြူခိုးဝေပြီး အရိပ်ကောင်းတဲ့ မြေပြင်များကိုကြည့်ကာ ဘဲဥပြုတ်မာမာများနဲ့ထမင်းခြောက်များကိုစားခဲ့တာ၊
ခတ်မန္ဒူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနဲ့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများကို လျှောက်သွားခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန် မြေပဲချောကလက် များကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကလေးမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တာ၊ အပျော်စီးဖောင်နဲ့ ခရီးမြန် နှင်ခဲ့တာ၊ ချုံရိုင်းများမှခူးဆွတ်ခဲ့တဲ့ ကုလားဆီးဖြူသီးချဉ်ချဉ်တွေမြုံ့ရင်းဆင်ကျောကုန်းပေါ်ကကျား ကိုကြည့်ခဲ့တာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲအရှေ့မြောက်ရှေ့တန်းဒေသမှာ တိဘက်ဘုန်းကြီးများရဲ့ ညှို့ဆွဲဖမ်းစားတဲ့ ခြေလှမ်းများဖြင့်ကပြတဲ့ သေမင်းတမန်အက သရုပ်ဆောင်ဖျော်ဖြေမှုကို ကြည့်ခဲ့တာတွေပေါ့။
ဆွစ်ရေကန်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရင်း ရဲတိုက်ထဲမှာ လဘက်ရည်အတွက် နှင်းဆီသီးယိုကို နေ့စဉ် အသားပေးထားတဲ့ အရသာရှိအစား အစာကို ပျော်ရွှင်စွာ စားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလဲန်ရဲ့ရေကြောင်းအတွင်း ကွေ့ကောက်သွားလာနေတဲ့ တူးမြောင်းသွားလှေပေါ်မှာ မိသားစုခွေးကလေးကို ပေါင်းမိုးပေါ်တင်ကာ ပကတိတည်ငြိမ်နေတဲ့ စိမ်းလန်းမြင်ကွင်းများကို ခြုံသိုင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ကျယ်ပြန့်ပြန့် စကော့တလဲန်ရဲ့ ညိုမှိုင်းမှိုင်းသမုဒ္ဒရာရှိ ဖျံအချို့ကစားရာ ‘တိုင်ရီး’ကျွန်းရဲ့ သဲလွင်ပြင်များပေါ်မှာ စခန်းချခဲ့ကြပါတယ်။
ရုပ်လွှာပုံရိပ်များဟာ အရောင်သွေးစုံစွာစိတ်ဝင်စားနှစ်သက်ဘွယ်များနဲ့ပြည်ဝလျက် အံမခန်းပါပဲ။ ဒါပေမင့် တခုချင်းစီမှာတော့
ဒါကြောင့်လဲ ဇွန်လထဲကျရောက်မဲ့ ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်လာတဲ့ ကျွန်မသား မောင်ထိန်လင်း(ကင်းမ်)က ကျွန်မကို အားလပ်ရက်အဖြစ်ခရီးထွက်မယ်လို့ပြောတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အဆို ပြုတာပဲလို့ ကျွန်မအထင်ရောက်သွားတာ အံ့သြစရာမဟုတ်တော့ပါ။ ဒါပေမင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုနဲ့ စဉ်းစားတာအချို့အပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်အကြာမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အချိန်တိုအားလပ်ရက် အဖြစ် ကျွန်မဆုံးဖြတ်တာဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အစီအစဉ်များရေးဆွဲကြခဲ့ပါတယ်။ မုတ်သုန်ရာသီရဲ့ အင်အားပြည့်ရွာသွန်းနေချိန်မှာ နိုင်ငံရဲ့
အလယ်ပိုင်းဒေသ　“အပူပိုင်းဇုံ”ကို ရွေးချယ်လိုက်တာ လက်တွေ့ကျခဲ့ပါတယ်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်တပ်များ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံး ဘုရင်ကိုဖမ်းသွားခဲ့တဲ့ မန္တလေး မြို့ရှိပါတယ်။ သို့မဟုတ် ပုဂံမြို့လဲရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဟောင်းပါ။ ပုဂံမှာ ဘုရားစေတီတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီး ကြာရှည်စွာမှေးမှိန်နေတဲ့ ဂုဏ်ရောင်ဆောင်ခဲ့မှုအတွက် ကျန်ရစ်နေတဲ့ သက်သေပါ။ ပုဂံဟာ ထူးကဲတဲ့ဆောက်လုပ်မှုစွမ်းအင်ဖော်ပြချက်နောက်ကွယ်မှ တွန်းအားကို အ သည်းတယား မေးခွန်းများထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ ပုဂံဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုလား၊ ကြွယ်ဝချမ်း သာမှုလား၊ သောမနဿဖြစ်စွာကျက်သရေ ဂုဏ်ဆောင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် သုံးခုစလုံးရဲ့
ပုဂံကို ရွေးချယ်ရတာကျွန်မတို့အတွက် အခက်အခဲတစုံတရာမရှိခဲ့ပါ။ မြို့တော်ဟောင်းရဲ့ ဘုရား ကျောင်းကန် စေတီပုထိုးများစွာဟာ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများနဲ့ ဘုရားဖူးများကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ဒါပေမင့် ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ ဧည့်သည်အနည်းငယ်သာရှိတတ် တာမို့ ငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့နားနေရမဲ့ နေ့များကို ကျွန်မတို့ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်ပါ့မယ်။
ကျွန်မတို့သားအမိအတွက် ဒီတခေါက်ဟာ ပုဂံကိုပထမဦးဆုံးလည်ပတ်မှု ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လို့ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများများကို
သွားရောက်လည်ပတ်စရာမလိုသေးသဖြင့် ကျွန်မအတွက် ထူးခြားမှုရှိစေမဲ့နေရာအချို့ကိုသာ ရွေးသွားခဲ့ကြတာပါ။
အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကင်မ်နဲ့ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ခွေးလေး ‘တအိချိခို’(မိသားစုရဲ့အားလပ်ရက်ခရီးအဖြစ်လာမှတော့ ဒီခွေးလေးကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ဘို့ မေးစရာမလိုပါ) ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်မဲ့နေရာပဲ ဖြစ်ဘို့ပါပဲ။
ဒီစံပြနေရာလေးကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေ ဦးခွန်သာမြင့်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အာရုံအပြောင်းအ လဲအနည်းငယ်အဖြစ်ပြောပါရစေ။ ဦးခွန်သာမြင့်ဟာ ဦးဟံသာမြင့်ရဲ့ညီငယ်ပါ။ ဦးဟံသာမြင့်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ရဲ့ ဗဟိုကော်မီတီဝင်တဦးပါ။
၁၉၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘုတလင်မဲဆန္ဒနယ်မြေကနေ အဖွဲ့ချုပ်ကိုကိုယ်စားပြုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မဲဆန္ဒ ၈၀% အပြတ်အသတ်နဲ့ အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကိုဟံသာနဲ့ကိုခွန်သာတို့ဖေဖေနဲ့ကျွန်မဖေဖေတို့ဟာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှာ နိုင်ငံရေးစတင်လုပ်ကိုင်ရာမှ အပေါင်းအသင်းများဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသိန်းဖေမြင့်နဲ့ကျွန်မရဲ့ဖေဖေတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဟာ အစဉ် သဟဇာတ မျှတတ်ကြတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့နောက်ဆုံးအခြအနေအဆင့်အထိ သူတို့ဟာ မိတ်ဆွေအဖြစ်ထက် သဘောထားကွဲလွဲသူများအနေနဲ့သာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမင့် အမြင်မတူမှုများကို လေးစားရေးအ တွက်အမွေနဲ့ မလိုမုန်းထားဘက်လိုက်မှုနဲ့ မကျေချမ်းမှုများမှလွတ်မြောက်ရေးတို့နောက်ကို သူတို့နှစ် ဦးစလုံး လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ကို အပေါင်းအသင်း နဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအဖြစ်
အဘိုးတန်များ မျှဝေခြင်းဖြင့် အတူတကွလုပ်ကိုင် ချည်နှောင်မိတ်ဖွဲ့စေနိုင်စေပါတယ်။ တဦးကိုတဦး အထင်မသေးကြပဲ ကြည်နူးပျော် ရွှင်စရာများ မျှဝေပြီးစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ကိုခွန်သာက အင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိ ကျွန်မကိုကူညီဘို့လာရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ ကျွန်မရဲအိမ်ကို လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင် မှုများပြုလုပ်ပေးမဲ့ပိသုကာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးဘို့ပါ။ ထောင်မှ အိမ်အကျယ်ချုပ်ကိုပြောင်းလိုက်ရပြီးနောက် အိမ်ပြင်ဘို့အလုပ်စချိန်မှာ ပိသုကာအဖြစ် ကိုခွန်သာနဲ့ အထွေထွေကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများအဖြစ်ကျွန်မခန့်အပ်ထားတဲ့ အခြားမိတ်ဆွေနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ ကိုထင်ကျော် နဲ့ ကိုနီတို့လဲ အိမ်ပြင်ဆင်မှုများပြီးမြောက်မဲ့ လိုအပ်ချက်များအတွက် လပေါင်းများစွာ နေ့စဉ် အိမ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုထင်ကျော်နဲ့ကိုနီတို့ဟာလဲ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တဦးနဲ့တဦးရင်းနှီးးခဲ့ကြ တဲ့ သက်ဆိုင်ရာဖခင်များမှ ဆက်နွယ်သိကျွမ်းခဲ့ကြတာပါ။ နောင်တချိန်မှာ သားများ၊ ဘခင်များ(မိခင် များ) အကြောင်းကိုရေးသားပါဦးမယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ လူကြီးများရဲ့ရင်းနှီးခဲ့မှုများကြောင့် ကျွန်မမှာ အထောက်အပံ့၊ အကူအညီနဲ့ မိတ်ဆွေများကို ဆုလာဘ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ပိသုကာအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ကိုခွန်သာဟာ လုံခြုံရေးအရာရှိ၊ ခွေးထိန်း၊ အရေး ပေါ်ယာဉ်မောင်းအဖြစ်အပြင်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်း ခရီးသွားကိုယ်စားလှယ်နဲ့ အားလပ်ရက်ခရီး စီစဉ်သူအဖြစ် ကျေးဇူးပြုကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၆ ဦးပါ ကျွန်မတို့အဖွဲ့အတွက် ပုဂံဟော် တယ်ကို ကိုခွန်သာရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာ ပိုမိုပျော်ရွှင်ဘွယ်ရာသာမဟုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အထင်ရှားဆုံး သမိုင်းဝင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးအချို့ကို သွားရေးလာရေးလွယ်ကူစေနိုင်တဲ့နေရာအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ လှပတဲ့နေရာပါ။ အားလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဝန်ထမ်းများဟာ ယဉ်ကျေးရည်မွန်ကြပါတယ်၊ ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်၊ ဧည့်သည်များက မိမိတို့ကိုအမှန်တကယ် ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ ကြိုဆိုခြင်းခံရတယ်လို့ ခံစားစေနိုင်တဲ့ အထူးအရည်အချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါ တယ်။
(၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ထုတ် ဂျပန်နိုင်ငံ မိုင်အိနိချိနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့Letter From
Burma: Holiday-1- ကိုဘာသာပြန်ပါတယ်။)
This is the sixth installment of Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi’s monthly Mainichi
column, “Letter from Burma.”
What I see now through the prism of 66 years is different from what I saw 60 years ago or even six
years ago because both the world and I have changed over the intervening period. Sixty years ago my relations (if it could be called that) with animals was distant. I have written about the unattractive mongrel dogs and sorry looking cart horses that wereapart of the scene of my childhood. The other
inhabitants of the animal world with which I was familiar during my early years were birds.
Rangoon was not thenabuilt-up city and we lived inaquiet lane of red earth and broken rocks,
bordered by tall bamboo bushes,ascraggy, pitted field where our cows grazed,aweed-infested pond and crumbling brick walls. Opposite our house wasamonastery. The wooden buildings in traditional mode, the unkempt grounds, the old shrines and stupas and the deep tranquillity emphasized its separation from
the busy world of laity. Both the monastery and our house were on elevated ground, almost high enough to be small hills, so the lane in between was likeanarrow valley.
Our garden was spread out on three different levels and the many trees made it an attractive habitat for
a wide variety of birds. The most common were crows, minahs, doves, pigeons and sparrows. These were so numerous we hardly noticed them at all but I liked to watch the crows flying home to roost in the evening;agreat black feathery stain spreading and cawing its way across the sky. The plaintive call of the koel was part of the music of early summer but I hardly ever caughtaglimpse of the little bird and, what surprises me now, I was not particularly curious about it. I remember getting excited aboutaparrot that perched onatree and looked down regally at us as if fully aware of the honour it was bestowing by its passing presence. One day an owl dropped out ofatree in broad daylight. The gardener held it up for us to see and it blinked sleepily at my awed face.
At the top our lane was an old house built in nineteenth century Indian style. The romance of its fading grandeur and sprawling, neglected garden was enhanced by the indefinite absence of its owners. We were told that they were wealthy Indians who had fled when World War II came to Burma. Somehow they had managed to leave behind caretakers who had looked after the property right through the war and who continued to remain loyally at their posts although their employers never came back. On rare occasions, these caretakers, whom I recall as tall, dhoti-clad Indians, allowed us to wander in their garden. Among the tangle of untended
foliage wereacouple of fountains with large, grey stone basins which for me spelt the height of splendour even though both were completely dry. The crowning glory of this mysterious abode was two large cockatoos that sat on their perches and made the lonely garden bright with their iridescent colours. They were the most exotic creatures I had ever seen outside the Rangoon zoo.
In those days of few distractionsavisit to the zoo wasavery special treat. It was not far from our house and the roaring of lions that could be heard over the quiet of early dusk would fill me with wonder. I asked the adults why the lions roared every evening and some answered that this signaled feeding time while others said the
beasts were crying out their longing for their homes in the jungle. When I saw these animals in their zoo cages I was struck by their restlessness and imagined that their weary pacing was also linked to the longing for their
faraway homes. AsaTuesday born I am, according to Burmese astrological belief,alion, so I particularly empathized with the big cats.
The simians were another matter altogether. The ‘monkey village’ which was popular with visitors to the zoo made me uneasy. To my eyes the monkeys did not look friendly nor happy. Their eyes seemed sharp with malevolence and their mouths jeered at all those who were laughing over their antics. Peanuts and other food thrown to them were caught with dexterity andagrimace. This was totally unlike the elephants, which accepted offerings of bananas and buns withalook of contentment on their huge faces and languorous movements of the trunk that I translated asagracious salute of thanks.
After I grew to adulthood I made only two zoo visits, one in Nepal and one in London. Michael and I went
to see the Kathmandu menagerie because we had an afternoon to spare andazoo in the Himalayas seemed so improbable. It turned out to bearather sad, dusty place with dispirited looking animals. We were advised to eave our Bhutanese terrier outside the entrance as the big cats were usually fed on dog meat and the smell ofaliving meal might have been too exciting for them. It was an experience that invited no repetition.
My next, and very last, zoo visit took placeafew years later when I took my son Alexander to Whipsnade. In comparison to Kathmandu zoo it was beautifully kept but I found I had lost all taste for looking at animals in captivity. The animals had not changed but my sensitivity to captivity and to human domination had changed. I
did not know then that my views on relations between animals and humans would change even more as the world around me changed in ways I had not expected.
တိရစ္ဆာန်တို့အကြောင်း စကားလက်ဆုံ – ၂ –
(လစဉ် မ်ိုင်အိနိချိ-ကော်လံတွင် ဖော်ပြနေသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ “မြန်မာပြည်မှစာ” ကဏ္ဍ၏ ဆဋ္ဌမ မြောက်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်)
၆၆ နှစ်တာကာလ ပရစ်ဇင်မ်ကို ထိုးဖောက်ကြည့်ရခြင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၆၀ သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ကိုတောင် ကြည့်မြင်ခဲ့ရခြင်းနဲ့
ကွာခြားနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီ ယှက်နွယ်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ကျွန်မဟာ ပြောင်းလဲလာခဲ့လို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆၀ က တိရစ္ဆာန်များနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဆက်နွယ်မှု(ဒီလိုပဲပြောနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်)ဟာ ကွာလှမ်း ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကလေးဘဝရဲ့မြင်ကွင်းတစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့　စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့ ခွေးဗန္ဓတ်များနဲ့ သနားစရာမြင်တွေ့ရတဲ့ လှည်းဆွဲမြင်များအကြောင်းကို ကျွန်မရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်က ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတဲ့ တိရစ္ဆာန်လောကရဲ့ အခြားသတ္တဝါတွေကတော့ ငှက်များဖြစ်ကြ
အဲဒိအချိန်တုန်းက ရန်ကုန်ဟာမဖွံ့ဖြိုးသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဟာ မြေနီနဲ့ ကျောက်ခဲကျိုးများ ခင်းထားတဲ့လမ်းမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။ ရှည်တဲ့ ဝါးရုံများ၊ ကျွန်မတို့နွားများရဲ့စားကျက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှည်မျောမျော လွင်တီးခေါင် ချိုင့်ကွင်းပြင်များ၊ ရေမှော်ရေညှိများရှိနေတဲ့ ရေကန်နဲ့ ပြိုမ ယောင်အုဋ်ခဲနံရံများဖြင့် အနားသတ်ထားပါတယ်။
ကျွန်မတို့အိမ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရာပုံစံရှိနေတဲ့ သစ်သားအဆောက်အဦးများ၊ ပစ္စလက္ခဖြစ် နေတဲ့မြေကြီးများ၊ ရှေးဟောင်းဗိမာန်များနဲ့ရုပ်ပွား တော်များနဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးမှုဟာ လူသာမန်များရဲ့ ပျားပန်းခတ် အလုပ်ရှုပ်နေ တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ ခြားနားထားကြောင်းကိုအလေးအနက်ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျွန်မတို့အိမ် နှစ်ခုစလုံးဟာ တောင်ငယ် လေးများလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့ ကုန်းမြင့်တွေပေါ်မှာတည် ရှိနေကြတာကြောင့် ကြားထဲကလမ်းလေးဟာ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ တောင်ကြားချိုင့် ဝှမ်းနဲ့တူနေ ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ပန်းခြံဟာ ကွဲပြားတဲ့အမြင့် ၃ မျိုးပေါ်မှာဖြန့်ကျက်တည်နေပြီး၊ သစ်ပင်များစွာဟာ ငှက်ပေါင်းစုံရဲ့ စိတ်ဝင်တစားဆွဲဆောင်စရာဘုံ အဖြစ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အတွေ့များရ တဲ့ငှက်တွေ ကတော့ ကျီးကန်းများ၊ သာလိကာများ၊ ချိုးများ၊ ခိုများ နဲ့ စာကလေးများဖြစ်ကြ ပါတယ်။
အရေအတွက်များလွန်းလို့ ငှက်အားလုံးကို သတိမထားနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမင့် ညနေပိုင်း ကျီးကန်း များ အိပ်တန်းတက်ဘို့ ပျံသန်းနေတာကို စောင့်ကြည့်ရခြင်းကို ကျွန်မနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အပြန်လမ်း ကောင်းကင်ပြင်မှာ ကြီးမားတဲ့အနက်ရောင် တောင်ပံဖြန့်ကျက်
ခြယ်မှုန်းလျက် ကျီးအာသံများ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
ခိုငှက်ကလေးရဲ့ ဆွဲဆွဲငင်ငင်အော်မြည်သံဟာ နွေဦးရဲ့ဂီတသံတစိတ်တပိုင်း ဖြစ်နေခဲ့ပါ တယ်။ ကျွန်မကတော့ ငှက်ကလေးကို ဖြတ်ခနဲ တောင် သတိမထားခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ အထူး တလည် စူးစူးစမ်းစမ်းမရှိခဲ့တာကို အခုအချိန်မှာ ကျွန်မအံ့သြမိပါတယ်။
တနေ့မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး ဇီးကွက်တကောင် သစ်ပင်ကပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဥယျဉ် မှူးက ကျွန်မတို့ကြည့်ဘို့ကောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြထိတ်လန့်နေတဲ့ကျွန်မမျက်နှာကို ဇီးကွက် ကလေးက အိပ်ချင်မူးတူးမျက်စိနဲ့ ပေကလပ်ပေကလပ် ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့လမ်းထိပ်မှာ ၁၉ ရာစုအိန္ဒိယပုံစံ အိမ်အိုတဆောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မှေးမှိန်အားပျော့လာ တဲ့ ဒီအိမ်ရဲ့ ခန့်ညားထယ်ဝါမှုနဲ့ ဖြစ်သလို ပြန့်ကျဲနေတဲ့စွန့်ပစ်ခံခြံတို့ရဲ့ လွမ်းဆွတ်မှုကို မရေရာတဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့မှုက ပိုမိုစေခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်တွေဟာ အိန္ဒိယနွယ်လူချမ်းသာများဖြစ် ကြောင်း၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာလို့ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ကျွန်မတို့သိထားခဲ့ပါ တယ်။
အိမ်စောင့်များလက်ထဲကို ပိုင်ရှင်တွေက တနည်းနည်းနဲ့ စီစဉ်အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကာလ အတွင်း အိမ်စောင့်များက တလျှောက်လုံး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးလျက်၊ သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင် များ ဘယ်တော့မှပြန်မလာလဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့သူတို့အလုပ်မှာ ဆက်လက်ထမ်းဆောင် နေကြပါတယ်။
ကျွန်မမှတ်မိတဲ့ ဒီအိမ်စောင့်များဖြစ်ကြတဲ့ ဒိုတီဝတ်အရပ်ရှည်ရှည် အိန္ဒိယနွယ်ဘွားများက တော့ ကျွန်မတို့ကိုသူတို့ရဲ့ပန်းခြံထဲ ရှားရှားပါး ပါလည်ခွင့်ပြုခဲ့ဘူးပါတယ်။ အစောင့်အရှောက် ခံမဲ့သစ်ရွက်အရှုပ်အထွေးတွေကြားမှာ ရေပန်းနှစ်ခုနဲ့ ကြီးမားတဲ့အညိုရောင် ကျောက်ရေ ကန်ကြီးများရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးဟာ လုံးလုံးခြောက်သွေ့နေလင့်ကစား သူတို့ရဲ့ခန့်ညားထယ်ဝါမှုဟာ ကျွန်မကို အံ့သြစေခဲ့ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဒီဗိမာန်ရဲ့ကျက်သရေကိုဆောင်နေတာကတော့ သူတို့အိပ်တန်းမှာ နားနေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ကတ္တဝါကြီး နှစ်ကောင် ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်လွင် နေတဲ့အရောင်များဖြင့် အထီးကျန်ပန်းခြံကို တောက်ပနေစေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ရုံပြင်ပမှာတွေ့ရတဲ့ အရောင်အသွေးအစုံစုံနဲ့စွဲမက်နှစ်သက်ဘွယ် တိုင်းတပါးမှလာတဲ့ သတ္တဝါများဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက တိရစ္ဆာန်ရုံကိုစိတ်အပန်းဖြေအလည်အပတ်သွားရတာက အလွန်ထူး တဲ့ ပြုမူချက်ပါ။ တိရစ္ဆာန်ရုံဟာ ကျွန်မတို့အိမ်နဲ့မဝေးလှပါ။ ခြင်္သေ့များရဲ့ဟိန်းဟောက်သံတွေ ကို ဆည်းဆာချိန်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးကြားနိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ညနေတိုင်းမှာ ဘာ ကြောင့် ခြင်္သေ့တွေ ဟိန်းကြရတာလဲလို့ လူကြီးများကို ကျွန်မမေးခဲ့ပါတယ်။ အစာကျွေးချိန်ကို သတိပေးတာလို့ တချို့က ဖြေကြပါ တယ်။ တောထဲက သူတို့ဌာနေကိုလွမ်းကြလို့ သတ္တဝါ ကြီးများက ငိုတာပါလို့ တချို့ကတော့ ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲကလှောင် အိမ်တွေထဲမှာ ဒီတိရစ္ဆာန်များကို ကျွန်မမြင်ရတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့အငြိမ်မ နေ လှုပ်ရှားမှုများကို သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ခြေလှမ်း များဟာ ဝေးကွာနေတဲ့သိူတို့ရဲ့ဌာနေများကို လွမ်းမောတမ်းတခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေမှာပါလား လို့လဲ တွေးထင်မိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ဝေဒအယူအရ အင်္ဂါဖွား ကျွန်မဟာခြင်္သေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ခြင်္သေ့ကြီးများကိုအထူး မျှဝေစာနာခဲ့တာပါ။ မျောက်များဟာလဲ အလားတူ အခြားကြောင်းအရာတခုပါ။ လာလည်ပတ်သူများအကြား ထင်ရှားတဲ့ “မျောက်ရွာ”ဟာ ကျွန်မစိတ်ကို မချမ်းမြေ့စေခဲ့ပါ။ ကျွန်မရဲမျက်စိထဲ မတော့ မျောက်များဟာ မဖော်ရွေသလို မပျော်ရွှင်နေသလို ဖြစ်နေတာမြင်တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့ မျက်စိများဟာ ယုတ်မာမှုများနဲ့တောက်ပနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဟာသလုပ်ရပ် တွေအပေါ် ရယ်မောနေကြတဲ့သူများ ကို သူတို့ရဲ့ပါးစပ်များကလှေင်ပြောင်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကိုပစ်ပေးတဲ့ မြေပဲနဲ့အစားအစာများကို ရှုံ့မဲ့တဲ့မျက်နှားများဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ဖမ်းယူခဲ့ ကြပါတယ်။
ဒါဟာ ဆင်များနဲ့ လုံးဝ မတူတာပါပဲ။ ပေးကမ်းလာတဲ့ငှက်ပြောသီးများနဲ့ ဘန်းပေါင်မုန့်များကို ကျေနပ်နှစ်သက်တဲ့မျက်နှာကြီးများနဲ့
နှာမောင်းရဲ့ညှိုးလျလျလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ဆင်များက လက်ခံယူကြပါတယ်။ ဒါကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ကျက်သရေရှိစွာ အလေးပြုခြင်း လို့ ကျွန်မက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ ကြီးကောင်ဝင်လာပြီးနောက် တိရစ္ဆာန်ရုံကို နှစ်ခေါက်သာ အလည်အပတ်သွားခဲ့ပါ တယ်။ တကြိမ်ကတော့ နိပေါမှာနဲ့ နောက်တခါကတော့ လန်ဒန်မှာပါ။ နေ့လည်ပိုင်းမှာအားလပ်နေလို့၊ အရောက်အပေါက်ခက်ခဲလွန်းတဲ့ ဟိမဝန္တာမှာရှိ
တိရစ္ဆာန်ရုံ ဖြစ်နေလို့ မိုက်ကယ်နဲ့ကျွန်မတို့ ခတ်မန္ဒူ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရုံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာ ဟာ စိတ်မကောင်းဘွယ်၊ စိတ်အားငယ်စရာအသွင်ဆောင်နေကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်များရှိနေတဲ့ ဖုံထူတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ်။
ခြင်္သေ့များဟာ များသောအားဖြင့် ခွေးသားကိုစားနေကြရတာ ဖြစ်လို့ သက်ရှိခွေးရဲ့အနံ့ ကို ရသွားရင် သူတို့အဘို့ စိတ်ကြွစရာဖြစ်စေနိုင်လို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘူတန်တယ်ရီယာခွေးလေးကို ဝင်ပေါက်အပြင်မှာထားရစ်ခဲ့ရန် အကြံပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ ဟာ နောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်ပေါ်ရဘို့ ဘိတ်ခေါ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခါနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ် တိရစ္ဆာန်ရုံသွားလည်ခဲ့တာကတော့ နောက်နှစ်အနည်းငယ် အကြာမှာ ကျွန်မသား အလက်ဇန္ဒရားကို
“ဝစ်ပ်စနိတ်”တိရစ္ဆာန်ရုံကို ခေါ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခတ်မန္ဒူတိရစ္ဆာန်ရုံထက်စာရင်တော့ လှလှပပရှိပါတယ်။ ဒါပေမင့် လှောင်ထားခံနေ ရတဲ့တိရစ္ဆာန်များကို မြင်တွေ့ရတဲ့ ခံစားမှုရသ က ကျွန်မမှာပျောက်ဆုံးနေတာကို ကျွန်မ တွေ့ရပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များ ကမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ဖမ်းချုပ်လှောင်အိမ်သွင်းခြင်းနဲ့ လူသား ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှု အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကျွန်မရဲ့သဘောထားကသာ
တိရစ္ဆာန်များနဲ့လူသားတို့ဆက်ဆံရေးအပေါ် ထားရှိခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့သဘောထားအမြင်ဟာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ အဲဒီ အချိန်က ကျွန်မနားမလည်ခဲ့ပါ။ ကျွန်မ မြော်လင့်မထားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာဟာလဲ ပြောင်းလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုတာကို
Truman Capote’s inimitable heroine Holly Golightly, that
most worldly of waifs, kept her possessions in suitcases with luggage tags
that, in place of an address, bore the single word, “Traveling”. I
was barely out of my teens when I first came across this original approach to
abode and I thought it was wonderful and adventurous and interpreted it purely
in terms of physical movement.
This perception was strengthened after I was married as
Michael’s dedication to Himalayan studies frequently took us to remote parts of
the world and kept us on the move. Whenever we came back from our long journeys
I was surprised to find that many of our friends were still at their old
addresses. The peripatetic way of life seemed, to us, the normal one. Even
after both our sons were born, travel remained an integral part of our
existence. The last three years before I became caught up in the movement for
democracy in Burma, our homes moved between England, Japan and India.
Lives that have been described as journeys are, in
general, eventful. The mere passing of ordinary days are not usually seen as
worthy of the term “travel.” Events that have been smoothed
featureless by repetition enter into glacier mode, the slow movement frozen
into apparent standstill. It is only stillness itself that sharpens our senses
to the ebb and flow of the universe around us.
It was during my years of house arrest that I began to
know life as travel rather than travel as life. The sameness of my daily
routine heightened my sensitivity to the fleetness of time and to the
dissimilarity between every single one of the minutes and the hours that made
up the mosaic of each fast paced day. Impermanence ceased to be mere
philosophy, it became fact, the stuff of daily life, the appearing and
disappearing of moments that turned into weeks and months and years.
Regular practice of meditation no doubt did much to
sharpen such awareness. As I consciously crossed over from one state of
consciousness to another I began to feel that my permanent address was indeed
“Traveling.” I learnt to assess my “baggage” from time to
time that I might discard whatever should be discarded. Since I knew I would
always be traveling, I wanted to travel light.
The sense that I was onalong errantry through time and
through samsara, likeacharacter out ofafantasy tale, made me feel I could
reach out to fellow travelers despite high gates, barbed wire barricades and
endless miles. Surely they who are aware that they are onajourney even if
they do not know where it would lead and when it would end are linked to one
another by an understanding that transcends language and culture as well as
time and space? Those who travel uncharted territory develop mutual empathy
based on common experience of the hazards of venturing into the unknown with
only faith and daring as shield and armor.
My colleagues and I have traveledarough road over the
last two decades and when we see the people of Japan embarking on the uphill
path of one of the most challenging rehabilitation and reconstruction programs
the world has ever known, we not only sympathize deeply with them, we fervently
wish them all success. We want them to overcome all trials and difficulties as
we wish to overcome our own trials and difficulties.
The National League for Democracy has had to ride out
many waves of repression. In the worst of times we started each day by
enquiring who had been taken away in the night. Mondays were particularly bad
as the security forces liked to go about their sinister business during the
weekends when it was difficult for the members of our party to contact one
another. The telephones at our office and my house had been cut off for years
and from time to time the telephones of our most active colleagues were also
made inoperative. Those were the days before the advent of the cell phone, may
it be many times blessed, and we had to send our young people running around
collecting information on those who had been whisked away when by all norms of
justice and decency they should have been left to sleep peacefully in their own
What enabled us to get through those days of unrelenting
persecution with our sanity and even our sense of humor intact? It was our
strong sense of solidarity. It straightened our backs and kept us going however
heavy the oppression. We offer our solidarity to the peoples of the devastated
regions of Japan, we are with you as you travel the road to recovery and
Trying to decide on the subject of this month’s letter, I
asked myself: at suchatime is thereaplace for any writing that is not
relevant to the chief preoccupation of Japan today? Or would an article that has
nothing to do with the tsunami or its aftermath beawelcome change for weary
people? Last month I decided to postpone Animal Talk 2, as I did not think that
ruminations on animals would have been appropriate at suchatime of crisis.
“Next month,” I thought. Now that “next month” has become
this month, I still hesitate: is it yet appropriate? Then it occurred to me
that it would be good if I could have some idea of what the Japanese people
would like to read atatime like this. Could my readers let me know how best
my letters might be of some help to them? (By Aung San Suu Kyi)
Mainichi News, 2011 May 23
ထရူးမဲန် ခက်ပုတ်စ်ရဲ့ မတုပနိုင်တဲ့ သူရဲကောင်းမလေး
ဟော်လီဂိုလိုက်လီ(ခိုကိုးရာမဲ့ကလေး ငယ်များအနက် အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝဆုံးသူ)ဟာ သူ့ပိုင်ဆိုင်တာတွေကို ခရီးဆောင်သေတ္တာ များအတွင်း
သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ လိပ်စာအစား ‘ခရီးသွားခြင်း’ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို သေတ္တာများမှာ
ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ နေထိုင်ဘို့အတွက် ဒီ မူလကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး နည်း လမ်းရှာဘို့ရာ
ပထမဆုံးတွေ့ကြုံရချိန်မှာတော့ ကျွန်မဟာ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် လွန်မြောက် ခါစပါ။ အံ့သြစရာနဲ့
စွန့်စားစရာလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုလို့လဲ ရှင်းရှင်းသန့် သန့်ပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုက်ကယ်ရဲ့ ဟိမဝန္တာဒေသလေ့လာဆည်းပူးမှုအတွက် နှစ်မြှုပ်ထားစဉ်
ကျွန်မနဲ့လက် ထပ်ပြီးနောက် ဒီခံယူချက်ဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ကမ္ဘာရဲ့ဝေးသီခေါင်ဖျားတဲ့အရပ်
တွေဆီ မကြာခဏသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုလဲ ရွေ့လျားသွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ ခရီးဝေး များမှပြန်လာတိုင်း
ကျွန်မတို့ရဲ့မိတ်ဆွေများဟာ လိပ်စာဟောင်းများမှာ ဆက်လက်နေထိုင်
လျက်ရှိတာကို ကျွန်မ အံ့သြစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဘဝရဲ့ လှည့်လည်သွားလာခြင်းနည်းလမ်းဟာ ကျွန်မတို့အတွက်
သာမန်အနေအထားလို့ ခံစားထင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။ သားနှစ်ယောက်ကို မွေးလာပြီးတဲ့တိုင် ခရီးသွားလာခြင်းဟာ
ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ သမူဟအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။
ပါဝင်မလာမီ နောက်ဆုံး ၃ နှစ်မှာ ကျွန်မတို့ဟာ အင်္ဂလဲန်၊ ဂျပန်နဲ့ အိန္ဒိယတို့မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဘွယ်အဖုံဖုံနဲ့ ပြည့်စုံနေပါတယ်။ သာမန်နေ့များကိုဖြတ်သန်းခြင်းမျှဟာ “ခရီးသွားခြင်း”ဝေါဟာရနဲ့
ထိုက် ထန်တယ်လို့ ထူးထူး ခြားခြား မမြင်မိပါ။
ဖြစ်စဉ်များဟာ ရေခဲ မြစ်အသွင်ဝင်ရောက်သွားကာ တဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားမှုဟာ ထင်ရတဲ့ငြိမ်သက်သွားပုံ
အေးခဲ သွားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပတ်လည်ရှိ စကြာဝဠာရဲ့ လှိုင်းထခြင်းနဲ့စီးဆင်းမှုများကို
ကျွန်ုပ်တို့ အာရုံပြုခံစားဘို့ကို ဒီ တည်ငြိမ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ကသာ နှိုးဆွပေးနေတာပါ။
ဘဝ’ ဆိုတာထက် ‘ဘဝဟာ ခရီး သွားခြင်း’ ဖြစ်တယ်လို့ စတင်သိရှိလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျဆောင်ရွက်မှုများ
ထပ်တူဖြစ်နေခြင်းက အချိန်ရဲ့မြန်ဆန်ခြင်းနဲ့ ခြေလှမ်းသွက်နေတဲ့ တနေ့တာရဲ့ မှန်စီကွက်ချ
ရုပ်ပုံလွှာအဖြစ်ဖွဲ့တည်နေတဲ့ မိနစ်ပေါင်းများစွာနဲ့နာရီပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ တခုချင်းစီ
မတူညီမှု အပေါ် ကျွန်မရဲ့တုန့်ပြန်ခံစားမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မတည်မြဲခြင်းဟာ ဒဿနတွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ရုံမျှနဲ့ ရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။
ဘဝရဲ့နိစ္စဓူဝ ကိစ္စ တွေအဖြစ် ရက်သတ္တပတ်များ၊ လများနဲ့နှစ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့
အချိန်တွေ ပေါ်လာ တာနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပါပဲ။
သံသယမပွါးစရာပါပဲ၊ မှန်မှန်တရားထိုင်ခြင်းဟာ အဲဒီလို
သတိတရားထားနိုင်မှုကို ပိုမို ထက် မြက်စေခဲ့ပါတယ်။ စိတ်အနေအထားတခုကနေ နောက်တခုကို သတိထားဖြတ်ကျော်လာရ
တော့ ကျွန်မရဲ့အမြဲတမ်းလိပ်စာဟာ “ခရီးသွားခြင်း”ပဲအမှန်ဖြစ်ကြောင်း စတင်ခံစားလာခဲ့ရ
ပါတယ်။ လွှင့်ပစ်သင့်တာတွေလွှင့်ပစ်နိုင်ဘို့ အချိန်တိုင်းမှာ ကျွန်မရဲ့ “ခရီးဆောင်အိတ်”ကို
စိစစ်ရန် လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ အစဉ် ခရီးသွားမှာဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ သွားလိုခဲ့ပါတယ်။
အချိန်နဲ့သံသရာတွင်းမှာ ကြာမြင့်တဲ့ လမ်းလွဲခြင်း၌
စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်ထဲက ဇာတ်ကောင်တ ယောက်လိုပဲ ကျွန်မရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိတရားဟာ ဂိတ်အမြင့်များ၊
သံဆူးကြိုးအ ကာအရံများနဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့မိုင်ရှည်များရှိလင့်ကစား ခရီးသွားဖော်များဆီရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့
သေချာပါတယ်။ ဘယ်ကိုရှေ့ရှုပြီး ဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာမသိလင့်ကစား ခရီးလမ်းပေါ် ရောက်နေကြတဲ့သူတွေဟာ ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများနည်းတူ
အချိန်နဲ့နေရာများကို ကျော်လွန်ပြီး နားလည်မှုရှိခြင်းဆိုတာနဲ့ တဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်နေကြတယ်ဆိုတာကို
အညွှန်းမဲ့နယ်မြေကို ခရီးနှင်သူများဟာ သစ္စာတရားနဲ့ရဲရင့်ခြင်းကိုသာ
ဒိုင်းနဲ့လက်နက်သဖွယ် သုံးကာ အမျိုးအမည်မသိ စွန့်စားမှုအန္တရာယ်များရဲ့ ဘုံအတွေ့အကြုံအပေါ်
အခြေခံတဲ့ အပြန်အလှန် မျှဝေခံစားမှုများ တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။
အနှစ် ၂၀ ကျော်မှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီး လမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးသိနေတဲ့
စိန်အခေါ်ဆုံးတခုဖြစ်တဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားခြင်းနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းများရဲ့တောင်အတက်လမ်းပေါ်မှာ
ဂျပန်လူမျိုး များ စတင်တက်နေကြတာ ကျွန်မတို့မြင်တွေ့ကြရတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း
အကြင်နာသက်ရရုံမျှသာမက အောင်မြင်မှုအပေါင်း ရရှိစေကြောင်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆန္ဒပြု ဆုမွန်ချွေသလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဒုက္ခဆင်းရဲများနဲ့အခက်အခဲများကို
ကျော်လွန်အောင်မြင်လာဘို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းသကဲ့သို့ ဂျပန်လူမျိုးများလဲ သူတို့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲများနဲ့အခက်အခဲများကို
ကျော်လွှား အောင်ပွဲခံနိုင်ကြပါစေရန် ကျွန်ုပ်တို့လိုလားလျက်ပါ။
အဆိုးဆုံးကာလများမှာတော့ ညက ဘယ်သူများအဆွဲခံလိုက်ရပြီလဲဆိုတဲ့
စုံစမ်းမှုနဲ့ နေ့စဉ် စတင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့များဟာ အထူးသဖြင့် ဆိုးရွားလှပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင် များ တဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်မှုခက်ခဲမဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများမှာ လုံခြုံရေးတပ်များဟာ
အန္တရာယ်ပေးမဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်တတ်လို့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတက်ကြွ ဆုံးရဲဘော်ရဲဘက်များရဲ့ ဖုံးများလဲ အချိန်တိုင်း အဖြတ်ခံနေကြရပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ လက်ကိုင်ဖုံးပေါ်ထွန်းမှုမတိုင်မီနေ့များဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်များစွာ ဆုတောင်းနေခဲ့ရတာပါ။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ရာတွေပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နေနိုင်ဘို့ တရားဥပဒေနဲ့လူမှုကျင့်
ဝတ်များရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များမှသွေဖီကာ အဆွဲခံရသူများရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ရနိုင်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ရွှင်ပျ ဉာဏ်ခံစားမှုတွေ မူလအခြေမပျက် ထိဆက်မှုရှိအောင်
အဘယ်အရာက စွမ်းဆောင်ပေးနိုင် ပါ့မလဲ။
ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းရဲ့ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ ဖိနှိပ်မှုကိုမဆို ကျော်လွှားသွားဘို့ ဒီ
ခံစားမှုက ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကျောများကို ဖြောင့်မတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပါတယ်။ ပြန်လည်နလန်ထူရေးနဲ့ပြန်လည်အသစ်ဖြစ်ရေးခရီးကိုသွားနေတဲ့ သင်တို့နဲ့
ကျွန်မကိုယ်ကို ကျွန်မ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ယနေ့ဂျပန်ရဲ့ အဓိကနေရာယူနေတဲ့
အကြောင်း ခြင်းရာနဲ့ မဆီလျော်မဲ့ ရေးသားမှုမျိုးဟာ အံဝင်ပါ့မလားလို့။ ဆူနာမီနဲ့သူရဲ့အကျိုးဆက်တို့နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဟာ
ဒုက္ခခံစားနေကြရတဲ့ ပြည်သူများအတွက် ကြိုဆိုစရာ အ ပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါ့မလားလို့။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ‘တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း စကားလက်ဆုံ-၂’ကိုရွှေ့ဆိုင်းဘို့
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုအရေးအခင်းဖြစ်ချိန်မှာ တိရစ္ဆာန်အကြောင်းစမြှုံ့ပြန်ခြင်းဟာ
သင့်လျော်မယ်လို့ မထင် လို့ပါ။
နောက်လလို့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နောက်လဆိုတာ အခုအချိန်ပေါ့။
အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ဂျပန်ပြည်သူတွေ ဖတ်ချင်မဲ့
အတွေးအမြင်မျိုးကို ကျွန်မမှာရှိနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ သိမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များက
ကျွန်မရဲ့စာများဟာ သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကူညီနိုင်မလဲဆိုတာ ကျွန်မကိုအသိပေးနိုင်ကြပါ့မလားရှင်။
၂၀၁၁ မေလ ၂၃
(ဂျပန်နိုင်ငံ ၂၀၀၁၁ မေလ ၂၃ ထုတ် မိုင်အိနိချိသတင်းစာပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ “TRAVELLERS”ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါသည်။)
၂၀၁၁ မေလ ၂၅
Suu Kyi (Mainichi)
air. All four elements combined to wreak havoc on Japan. The land rumbled
and cracked; then
the sea sent upaterrifyingly exaggerated Hokusai wave that crashed down
pitilessly on the
already devastated coastline; then came voracious fire; then air, the last of
entered the fray with its lethal cargo of radioactivity. So much has been
earthquake-tsunami that ravaged Japan on March 11, synonyms and superlatives
destruction have been all but exhausted.
set of superlatives that has also been much in evidence: those relating to the
Japanese people seem custom-designed to cope with disaster: being
duteous, resilient, stoic, sedulous. The world watched with compassion and
people of the devastated nation went about the business of putting back to
shattered homes and cities in the understated, matter-of-fact manner that has
to be seen as the
Japanese way. In the end, the ultimate, the most powerful element is the
human spirit. It
serves to overcome whatever adversity any or all of the four physical elements
might throw at man
standing stubbornly, sometimes precariously, upright on two piffling legs.
of adversity, / Which, like the toad, ugly and venomous, / Yet wears a
precious jewel in
Surely the jewel in
the toad’s head is the human spirit, adamantine and brilliant in its
facets cut and
polished by the vicissitudes of life.
A subdued echo of
the fury of earth and sea unleashed on Japan the fateful day of the tsunami
sounded in Burma a
week later. An earthquake in the eastern part of the Shan plateau caused
deaths, brought down buildings and split the Union Highway along the centre
a deep, forked
crack. Meanwhile, strong winds lashed the seas south of the Irrawaddy delta and
thousands of fragile bamboo rafts bearing men whose job was to tend large fish
Most of the men were able to get back to land withinafew days but as I write,
are still said to be missing.
Since the encounter
with cyclone Nargis in 2008 the people of Burma have developed antennae
the natural disasters that seem to be occurring with greater frequency in all
Impulsive sympathy has matured into empathy born of personal experience.
For many of us in
Burma the struggle of the Japanese to rebuild their lives after the tsunami is
our own efforts to help the people in our eastern hills and our southern delta
get back toastate
of normalcy after the relatively small, but nevertheless life changing,
that had befallen
spirit that moves minds and hearts and bridges geographical and cultural
As soon as we heard
of the calamity that had struck Japan we wondered what we could do to
make her people
know how close we felt to them in their suffering, how much we wished to be of
some assistance in
suchatime of trouble. Sadly, we were not inaposition to offer material aid
any kind. We then
recalled that in addition to the rock-hewn qualities that enable them to face
challenges, the Japanese people possessasensitivity to beauty and poetry that
the tender aspect
of their strength. So we decided to put togetherasmall collection of poems
would go some way
towards expressing how much at one we feel with the Japanese people in
their dark hour.
contributed to our slip of an anthology are writers and poets who have suffered
struggle to assert the primacy of the human spirit. There is Hanthawaddy U Win
Executive Committee of the National League for Democracy, who wasaprisoner
twenty years, released only in 2008 when he was close to his seventy-ninth
still in jail he had written lines that roared outachallenge to those who had
deprived him and
others like him of their freedom: “Will the man crumble, or will the
Predictably, his poem for the Japanese people is equally vigorous. He writes of
tsunami, reincarnation of the Hiroshima bomb” and drawsacomparison
power” and the “hell of waves.”
Three more of our
poets have also served prison sentences for their political beliefs and
All of them view the
challenges of the tsunami in terms ofacombat between savagery (of nature
as well as of man)
and benevolence,acontest between travail and the human spirit. All, despite,
of, the hardships they themselves have undergone stand firmly on the side of
spirit. Nyein Thit writes:
It is the darker
kind of darkness / That heralds the dawn, / Truth pulls itself up on this
/ Oh World. . . . /
You too, grab this darkness bravely and haul yourself up.
contrasts the “black” Friday of the tsunami with the
“white” of global
lauds the fine sense of duty of the Japanese people. Phyapon Ni Lon U ends his
poem on the tsunami
with the simple assertion that the evil wrought by the pitiless wave cannot
overwhelm the might
Japan will vindicate our poets.
(By Aung San Suu
Note: This letter
should have been “Animal Talk (2)” but in the wake of the tsunami I
animals would not be appropriate at this juncture.
မြေ၊ ရေ၊ မီး၊ လေ။ ဓါတ်ကြီးလေးပါးက
ဂျပန်နိုင်ငံကို ဗြောင်းဆန်သွားအောင် အကြီးအကျယ်ပျက်စီး စေခဲ့ပါတယ်။
တကျွိကျွိ မြည်သံတွေလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြောက်မက်ဘွယ် ရာ ကြီးမားတဲ့ ‘ဟိုခုဆိုင်’လှိုင်းကြီး ပင်လယ်မှတက်လာခဲ့ကာ
ပျက်စီးနေပြီးဖြစ်တဲ့ ကမ်းရိုးတန်းကို အကြင်နာမဲ့စွာ ချေမှုန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက် ပြင်းပြတဲ့မီး
တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ သေစေနိုင်တဲ့ဓါတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လေဟာ
လူသတ် ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ အနုမြူဓါတ် ရောင်ခြည်နဲ့ ထိုးစစ်ဆင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံကို
ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ ငလျင်-ဆူနာမီ အကြောင်း မြောက်မြားစွာရေးခဲ့
ကြပါတယ်။ အားလုံးဟာ ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဘွယ်ရာနဲ့
ပျက်စီးမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပရိ
အကောင်းဆုံးရေးခဲ့ကြတာချည်းပါ။ ဒါပေမင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လှပါ
နောက်ထပ် အကောင်းဆုံးများအကြောင်းအရာ တစုံရှိနေပါ
တယ်။ ဂျပန်လူမျိုးများဟာ ကပ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်ရမဲ့ပုံစံအလေ့အကျင့်
စည်းကမ်းရှိမှု၊ တာဝန်သိမှု၊ အလိုက်သင့် တွန်းလှန်လွတ်မြောက်နိုင်စွမ်း
ရှိမှု၊ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှု၊
အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားတဲ့အိုးအိမ်များနဲ့မြို့များ အတွက် ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းများကို
ကမ္ဘာက အကြင်နာများ အံ့သြမှုများနဲ့ စောင့်ကြည့် နေလျက်ပါ။ အရှိအတိုင်းကျစ်လစ်စွာဆိုရလျှင်
ခေါင်းမာမာဖြင့် မတ်မတ်ရပ်နေတဲ့လူကို လွှင့်ပစ်မဲ့ ဓါတ်ကြီး လေးပါးမှတခု သို့မဟုတ်
အားလုံးးရဲ့အဖျက်အဆီးတွေကို ဒီတန်ခိုးက ကျော်လွှားအောင်မြင်စေပါ တယ်။
အသုံးခံပါ။ အရုပ်ဆိုးပြီး အဆိပ်ပြင်းတဲ့ဖားပြုတ်လိုပါ။ ဒါပေမင့် ခေါင်းမှာ အဘိုးတန်ရတနာကိုဆောင်းလျက်ပါ။
သေချာပါတယ်၊ ဖါးပြုတ်ခေါင်းပေါ်က ရတနာဟာ
လူသားစိတ်ဓါတ်ပါ။ ရတနာရဲ့ မြောက်မြားလှတဲ့ မျက်နှာကွက်များမှာ ပြတ်သားထက်မြက်မှုများရှိကာ
ဂျပန်ကို အမှိုက်လှဲရှင်းလင်းလိုက်ပြီး နောက်တပတ်အကြာ မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆူနာမီရဲ့
ငလျင်တခုလှုပ်ခဲ့လို့ လူရာချီသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဆောက်အဦးများ ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဟာ
အလယ်ခေါင်မှာ ခရင်းခွပုံအက်ကြောင်းကြီးနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ဘက်ပင်လယ်တွေမှာ လေပြင်းများကျ လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာချထားတဲ့ ငါးဖမ်းပိုက်များကိုစောင့်ကြည့်နေကြသူများကို
တင်ဆောင်ထားတဲ့ ထိခိုက်လွယ်ဝါးဖောင်များကို တိုက်စားသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူအများဟာ
မြန်မာပြည်သူများဟာ ကမ္ဘာ့နေရာအားလုံးမှာ အကြိမ်များစွာဖြစ်ပေါ်နေပုံရတဲ့ သဘာဝကပ်ဘေးများကို
အလွန်တုန့်ပြန်နိုင်မဲ့ အသိများတိုးတက်နေ ကြပါပြီ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအရပေါက်ဖွားလာတဲ့ စာနာမျှဝေခံစား ခြင်းအဖြစ် ရင့်ကျက်လာပါတယ်။
သူတို့ဘဝများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဘို့ကြိုးပမ်းနေတာကို ကြားသိရပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် တောင်တန်းများနဲ့ တောင်ဘက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှာ
သေးငယ်ပေမင့် ဘဝပြောင်းစေအောင် ကျရောက်လာတဲ့သဘာဝဘေးဆိုးများနောက်ပိုင်း ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်အောင်
ပြည်သူများကို ကူညီဘို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းမှုများရဲ့ ပုံကြီးချဲ့မြင်ကွင်းအဖြစ်မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ဒါဟာ လူသားစိတ်ဓါတ်က စိတ်များနဲ့
နှလုံးသားများကို ပထဝီအားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် ပေါင်းကူး
အကူအညီအချို့ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတာ ဂျပန်ပြည်သူတွေသိအောင် ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့
နောက် – ကျွန်ုပ်တို့ အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်။
ရင်ဆိုင်ဘို့ရာ ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ ကြံ့ကြံ့ခိုင်မာကျောတဲ့ အရည်အ
ဂျပန်လူမျိုးဟာ အလှနဲ့ကဗျာကို နှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ခွန်အားရဲ့ သိမ်မွေ့နုညံ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကဗျာများကို ပေါင်းချုပ်စာအုပ်ငယ်ကလေးမှာ
ဂျပန်လူမျိုးများအပေါ် ထားရှိတဲ့ခံစားချက်များ တနည်းနည်း
နဲ့ ဖော်ပြရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာများမှာ ပါဝင်ရေးသားသူများအနက် လူသားစိတ် ဓါတ်ရဲ့ အခြေခံတရားကို
ပေါ်လွင်ရန် ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ စာရေးဆရာများနဲ့ ကဗျာဆရာများ ပါဝင်ပါတယ်။
အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီဝင် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်လဲ ပါဝင်ပါ တယ်။ သူဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၇၉ ခုနှစ်မွေးနေ့ချိန်နီးမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။
“အာဏာငရဲ”နဲ့ “လှိုင်းများရဲ့ငရဲ”ကိုလဲ နှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကဗျာဆရာ ၃
ယောက်ကလဲ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်ရှားများကြောင့် ထောင်
သဘာဝသို့မဟုတ်လူသတ္တဝါရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့ စေတနာသဒ္ဓါ တရားတို့ရဲ့တိုက်ပွဲ၊ ဒူက္ခဝေဒနာနဲ့ လူသားစိတ်ဓါတ်တို့ ပြိုင်ပွဲအသွင်
အားလုံးက ရှုမြင် သုံးသပ်ထား ပါတယ်။
အားလုံးဟာ စိတ်ဓါတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဘက်မှာ ခိုင်မာစွာ
“အရုဏ်ကျင်းဖို့ ပိုမှောင်လာတဲ့ အမှောင်မျိုးပေါ့
….. အမှန်တရားဟာ အဲဒီအမှောင်ကိုဆွဲတက်လာ
အဲဒီအမှောင်ကို ရဲရဲသာ ဆွဲတက်ခဲ့တော့ …..။” လို့ ဆရာငြိမ်းသစ် က ရေးထားပါတယ်။
ဆရာ မုံရွာအောင်ရှင်က ဆူနာမီရဲ့သောကြာနေ့ “အမည်းကြီး”ကို ကမ္ဘာ့အကြင်နာ “အဖြူ”နဲ့နှိုင်းပြ
ထားပြီး ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို
ရိုးရိုးလေးပဲ ဆူနာမီအတွက် သူ့ကဗျာကို ဆရာဖျာပုံ
ဂျပန်လူမျိုးများက ရှင်းရှင်းလေးရှုမြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါ
– ဒီစာဟာ တိရစ္ဆာန်အကြောင်းစကားလက်ဆုံ(၂)ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပေမင့် ဆူနာမီဂယက်အချိန်မှာ တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း
ဂျပန်၊ ဧပြီ ၂၃)
( ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် မိုင်အိနိချိသတင်းစာပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ A FEW POEMS ကို ပြန်ဆိုပါတယ်။)
the third installment of Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu
monthly Mainichi column, “Letters from Burma.”
and colleagues who have been in prison have sometimes reminisced
small beasts and birds, and even insects, that had been their only
during long years of incarceration in stark, unfriendly cells. Cats
have been particularly adept at negotiating walls and bars and
themselves into the affections of lonely prisoners all too willing to
portion of what little food they had in exchange for the companionship of
creatures. I did not come across any cats during the two short periods I
within the precincts of Insein Jail but I had constant dealings with felines
my years of house arrest.
lover rather thanacat lover although the first pet I can remember
wasacat,
a big (at least it seemed big to my child’s eyes), dark coloured tom that
to my grandfather’s deep-voiced call of “Puss, Puss, Puss.” The rest
addressed it, respectfully, as “Grandfather’s Cat.” I only knew dogs
mongrels wandering the streets or as unwanted intruders that the adults
always trying to dissuade from taking up residence in our garden. One
pye-bitch managed to resist all efforts to dislodge her from the kitchen
producedalitter. I was so fascinated by the mass of wriggling puppies
ever dream was about them. I did not realize then that it wasadream, I
the puppies had actually come to huddle around my feet and when I
and found they were not there I could not understand what had
and felt totally confused.
streets of Rangoon were full of interesting forms of transport in the early
There were sharp-angled buses, beat-up World War II jeeps, pre-war
‘side-cars’ (bicycles with two passenger seats, back to back, attached to
and rickshaws. There were also canopied carts drawn by horses that
usually tired looking and gaunt, often with terrible sores. They were a
sight and it was in connection with these poor animals that I first
about the SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals). From
time, I saw another kind of horse: the ones in films about the American
It was difficult to believe that those strong, prancing, galloping,
spirited creatures were of the same species as their Rangoon brethren.
the sight of the spurs on their riders’ boots made me wonder if the
not have been just as useful out west as in the streets of my home
Delhi where my mother served as Burmese Ambassador to India that I
close contact with horses. My first riding lessons were onaskewbald
wide girth and uncertain temper named Prairie Oyster. Later, I joined a
club where the mounts bore such valiant names as Black Prince,
and Shivaji. Black Prince was my favourite because he hadasmooth
a comfortable saddle. I was not particularly keen on equine heroics.
a university student in England that I entered the world of dog lovers. I
holidays at the homes of English friends and, not too surprisingly, I
often findacanine charmer at the heart of the family. There was Sailor,
overweight Staffordshire terrier witharolling gait,ablack patch around one
eye and a
distinct taste for gin; he was also gentle and sweet-tempered and a
host. Then there was Handsome,agolden Labrador, large and
with an air of old world courtesy he had obviously acquired from
master,aretired colonel who combined the best attributes of an officer and a
with the traits of everybody’s favourite uncle.
Handsome I looked upon as friends but Impy, my Emergency Aunt’s
was family. When I was working at the United Nations the three of us
together in Manhattan. True to the maxim that dogs emulate their owners,
attitude towards me was maternal and protective. If I were out late she
up patiently with just the slightest hint of reproach and when people
not know came to visit she would make sure that they did not sit next to
Michael and I went to live in Bhutan immediately after our marriage in
acquiredadog of our own. He came to us asatiny white and brown
we thought hard to findareally suitable name for him but after
months of cogitation we decided that after all ‘Puppy,’ as we had been
him since he arrived, suited him best. When he was very small Puppy
around my throat and tussled regularly with the fur lining of Michael’s
slippers; he grew up to becomeaseasoned traveller, accompanying us
on journeys across half the globe; when our sons came into the world
benevolent, wrinkled-browed eye on them; asadignified old dog he
trademark of our household at Oxford, well known to (and, I think,
by) friends and family. Puppy died at the ripe old age of nineteen. By
I was under house arrest in Burma.
San Suu Kyi)
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အပေါင်းအသင်းများသည် အလွန်ညံ့ဖျင်းသည့် မနေအပ်သော ထောင်အကျဉ်းခန်းများတွင်
ကာလရှည်စွာထောင်အချခံရစဉ် မိသားစုသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ကြရ သော သတ္တဝါငယ်လေးများ၊ ငှက်များ၊ ပိုးမွှားလေးများအကြောင်းများကို
တခါတရံ စာမြုံ့ပြန်တတ်ကြပါ သည်။
ဘားတန်းများတွင်တွေ့ရတတ်သည့် ကြောင်များသည် အထီးကျန်ဖြစ် နေကြသည့် အကျဉ်းကျများ၏ မေတ္တာကိုရယူရန်
ချဉ်းကပ်တိုးဝင်တတ်ပါသည်။ ယင်းအကျဉ်းသားများ ကလည်း သက်ရှိသတ္တဝါများကို အဖော်ပြုနိုင်အတွက်
မိမိတို့၏စားကြွင်းစားကျန်လေးများဖြင့် အလဲ အလှယ် လုပ်တတ်ပါသည်။
အချိန်တို နှစ်ကြိမ်ကာလ နေခဲ့ရစဉ်အတွင်း ကျွန်မသည် ကြောင်တကောင် မျှမတွေ့ခဲ့ရပါ။ သို့သော်
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းခံနေရစဉ်တလျှောက်လုံး ကျွန်မသည် ကြောင်များ ကို အမြဲတွေ့နေရပါသည်။
“ပူစီ ပူစီ ပူစီ”လို့ခေါ်သံကို ပြန်ထူးသည့်ကြောင်ကြီး (ကျွန်မ၏ကလေးမျက်စိမှာတော့
အတော်ကို ကြီးပါသည်။)ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် ပထမဦးဆုံးသိမြင်ခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်မသည်
ကြောင်ထက် ခွေးကို ပိုချစ်ပါသည်။ ကျန်မိသားစုများကလည်း အဖိုး၏ကြောင်ဖြစ်၍ အဖိုးကိုလေးစား
စွာဖြင့် “ပူစီ ပူစီ ပူစီ”လို့
လမ်းများပေါ်တွင် ဝဲစွဲလေလွင့် ခွေးဗန္ဓတ်များ သို့မဟုတ် လူကြီးများက အိမ်နောက်ဖေး မီးဖို
ဆောင်များမှမောင်းထုတ်လေ့ရှိသည့် မလိုလားသောကျူးကျော်သူများအဖြစ်သာ ကျွန်မသိထားခဲ့ပါသည်။
မီးဖိုဆောင်မှ ဆွဲထုတ်အမောင်းခံရခြင်းကိုအာခံလျက် အမှိုက်များ ဖွသွားခဲ့ပါသည်။
ခွေးငယ်အုပ်ကို ကျွန်မ စိတ်ကူးအလွန်ယဉ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ ပထမ အိပ်မက်ကတော့ ခွေးအုပ်ငယ်တွေပဲဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ ဒါကို အိပ်မက်လို့ မထင်ခဲ့ပါ။ ခွေးငယ်တအုပ်ဟာ တကယ်ပဲ ကျွန်မခြေထောက်တွေကို
ကျော်လွှားပြေးလွှားနေတယ်လို့ ထင်မိခဲ့ပါသည်။ အိပ်ရာမှနိုးတော့ သူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ပါ။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ စိတ်အတွေးတွေ အားလုံးရှုပ်ထွေးနေပါတော့သည်။
ခုနှစ်၏ အစောပိုင်းလများတွင် ရန်ကုန်၏လမ်းများပေါ်၌ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဂျစ်ကားများ၊ စစ်ကြိုဆလွန်းကားများ၊ ဆိုက်ကားများ(စက်ဘီးဘေးတွင်
ကျောချင်းကပ်ခရီးသည် ၂ ဦးထိုင်ခုံကိုဘေးတွင်ကပ်ပြုလုပ်ထားသည့် ယာဉ်) နှင့် လံခြားများဖြစ်ကြပါသည်။
ပိန်လှီပြီး ခြေထောက်များကြောက်စရာအနာများရှိနေတတ်သော မြင်းများတပ်ဆွဲ သည့် ပေါင်းမိုးပါမြင်းလှည်းများလည်းရှိပါသည်။
သူတို့ကိုမြင်တွေ့ရသည်မှာ နှလုံးမချမ်းမြေ့ဘွယ် မြင်ကွင်း ဖြစ်ရပါသည်။ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်ကာ
တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှကာကွယ်သည့်အသင်း (SPCA – Society for the Prevention
of Cruelty to Animals)ကို ကျွန်မ စတင်လေ့လာမိတော့ပါသည်။
ကျွန်မ မကြာခဏ တွေ့မိခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်အနောက်တိုင်း ဇာတ် ကြမ်းရုပ်ရှင်များတွင် ဖြစ်ပါသည်။
သန်စွမ်း၊ မြူးကြွ၊ တဟုန်ထိုးခုန်ပေါက်၊ ခွါဆုံပေါက် ထွားကြိုင်းသော ထိုမြင်းများသည်
ရန်ကုန်မှ ညီကိုတော်မြင်းများနှင့် အမျိုးတူများဖြစ်နေသည်ကို ယုံနိုင်စရာ ခက်ခဲနေရ
SPCA သည်လည်း အနောက်နိုင်ငံများတွင် ကျွန်မနိုင်ငံကလမ်းများပေါ်တွင်မှာလို အသုံးမဝင်ပါကလားလို့
မြန်မာသံအမတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့တွင် မြင်းများနှင့် ကျွန်မအကျွမ်းဝင်ခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်မ၏ပထမမြင်းစီးသင်ခန်းစာများမှာ အဖြူနှင့်အုန်းခွံရောင်အကွက်အ ကျားအရောင်ရှိ လုံးပတ်ထွားပြီး
သဘောထားမသေချာသည့် “ပရေရီ အွိုက်စတာ”အမည်ရှိ မြင်းငယ် ကလေးပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
မြင်းစီးကလပ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ရဲစွမ်းသတ္တိအမည်များဖြစ်သော “ဘလက်ပရင့်စ်”၊ “ပရင့်သ်ဗီရာ့ဂ်ျ”နှင့်
“သျှီဗဂျိ” တို့၏ကျောပေါ်ရှိကုန်းနှီးပေါ်တွင်တက်စီးခဲ့ပါသည်။ “ဘလက်ပရင့်စ်” သည် ကျွန်မ၏အချစ်တော်မြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ချောချောမွေ့မွေ့ ပြေးသားကျကာ သက်တောင့်သက်သာကုန်းနှီး ‘က’လျက်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မသည် မြင်းစီးထူးချွန်သူ အဖြစ်တော့ မတော်ခဲ့ပါ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတွင် ခွေးချစ်သူများလောကသို့ ကျွန်မဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်သူငယ်ချင်းများ၏အိမ်များတွင် အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိရာ မိသား စုအလယ်တွင် ခွေးချစ်သူတဦးကို
လိမ့်လိမ့် လိမ့်လိမ့်ဖြင့်သွားတတ်သော မျက်စိတဘက်တွင် အနက်ကွက်ရှိ “ဆေလာ”ခေါ် စတက်ဖို့ဒ်ရှိုင်းယား
တယ်ရီယားမျိုး ခွေးလေးတကောင်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးပါသည်။ သူသည်အဝေးမှနေ၍ ဂျင်အရက်နံ့ကိုခံတတ်ပါသည်။
ညင်သာလျက် သဘောကောင်းသည့် အိမ်ရှင်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
“ဟဲန်ဒ် ဆမ်း”အမည်ရှိ ရွှေရောင် လာဘရာဒါ ခွေးလေးပါ။ ထွားပြီး ချစ်စရာ ကောင်းပါသည်။ သူ့သခင်
အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီးထံမှ အထင်အရှားအမွေခံထားသကဲ့သို့ သက်ကြီးလောက ၏ လောကွတ်ပျူငှာသော
အသံဖြင့်ဆီးကြိုဆက်ဆံပါသည်။ သူ့သခင်မှာလည်း လူကြီးလူကောင်း နှင့်အရာရှိတဦး၏ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းဉာဉ်ဖြင့်
အများ၏ “ဦးလေးကြီး”အဖြစ် လူတိုင်း၏အချစ်တော် ဖြစ်နေခဲ့သူပါ။
“ဟဲန်ဒ် ဆမ်း”တို့ကို ကျွန်မ၏သူငယ်ချင်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်မ၏ အရေးပေါ်အဒေါ်၏
အယ်ဇေးရှင်း “အင်မ်ပလီ”ကတော့ မိသားစုပါ။ ကျွန်မ ကုလသမဂ္ဂမှာ အလုပ်လုပ်စဉ် ကျွန်မတို့
၃ ယောက် မဲန်ဟတ်တန်မှာ အတူနေခဲ့ကြပါသည်။
သခင်များကိုအတုယူသည်ဟူသော ဆိုရိုးအတိုင်းအမှန်ပင် “အင်မ်ပလီ”၏သဘောထား သည် ကျွန်မအပေါ်
အမိသဖွယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါသည်။ ကျွန်မအပြင်ထွက်၍ နောက်ကျနေလျှင် အပြစ်တင်မှုအနည်းဆုံးဖြင့်
စိတ်ရှည်စွာစောင့်မျှော်နေတတ်ပါသည်။ သူ မသိသောလူများလာလျှင်လည်း ထိုသူများ ဆိုဖာခုံပေါ်
ကျွန်မဘေးတွင် ဝင်မထိုင်မိစေရန် အသေအချာဂရုစိုက်တတ်ပါသည်။
ခုနှစ် လက်ထပ်ပြီးပြီးခြင်း မိုက်ကယ်နှင့်ကျွန်မတို့ ဘူတန်တွင်နေထိုင်ရန် ရောက်ရှိချိန်တွင်
ကျွန်မတို့၌ ကိုယ်ပိုင်ခွေးတကောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူသည် အဖြူနှင့်အညိုအရောင်စုပေါင်းထားသည့်
ခွေးငယ်လေးအနေနှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သူကို သင့်တော်သောနာမည်ပေးရန် စဉ်းစားရအလွန်ခက်
ခဲ့ပါသည်။ နောင်လပေါင်းများစွာ အလေးအနက်စဉ်းစားပြီး နောက်ဆုံးမတော့ ရောက်ခါစက သူ့ကို
ခေါ်ခဲ့သည့် “ပါပီ”ဟူသောအမည်ဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ကျွန်မ၏လည်ပင်းကိုဖက်လျက်အိပ်ခဲ့ပါသည်။ မိုက်ကယ်၏ အိပ်ရာထဲစီး ဖိနပ်၏ အမွေးပွ သည်းကြိုးများနှင့်လည်း
ရာသီအလိုက် ခရီးသွားတကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာတခြမ်းခရီးထွက်ရာ တွင် ကျွန်မတို့နှင့်အတူတကွ
မြဲမြံခိုင်မာစွာအဖော်ပြုလိုက်ပါခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မတို့၏ သားများ လူ့လောက ရောက်လာတော့လည်း
သူက အကျိုးပြုဆောင်ရွက်လျက် ပါးရေတွန့်မျက်လုံးများနှင့် စောင့်ကြည့်ထိန်း ကျောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ခွေးအိုကြီးအနေနှင့် ကျွန်မတို့အောက်စဖို့ဒ်အိမ်ထောင်၏အမှတ်အသားအဖြစ် မိတ်ဆွေများ နှင့်မိသားစုမှ
ကောင်းစွာအကျွမ်းဝင်သိရှိကြခဲ့ပါသည် (လေးစားခံရသည်ဟု ကျွန်မထင်မြင်ပါသည်)။ “ပါပီ” သည်
အသက်မှည့်ရွဲသော ၁၉ နှစ်သားတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်မလည်း မြန်မာ
ခု မတ်လ ၇ ရက်နေ့ထုတ် မိုင်အိနိချိ ဂျပန်
(၂၀၁၁ ခု မတ်လ ၇ ရက်နေ့ထုတ် မိုင်အိနိချိ
ဂျပန်သတင်းစာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ANIMAL TALK ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ )
Suu Kyi sits belowaportrait of her father at her home in Yangon, Myanmar, on
Dec. 30, 2010. (Mainichi)
story of Pinocchio still popular with children? It is when such questions
my mind that I am made acutely aware of the peculiar gaps in my
with the outside world. Had I been in constant touch with my
or even with other people’s grandchildren over the years, I would
the answers. Fortunatelyafew days after Pinocchio had floated into
hadameeting with the children of the United States Embassy staff in
The oldest was around twenty while the youngest wasathree month
Japanese-American baby boy whose sleeping face hadapout of
that made him resembleaSumo wrestler planning his next
shaking move. Among the in-betweens wereafair number who were
with Pinocchio through the Walt Disney Film. Most of them thought
Cricket was the most interesting character in the story. This pleased me
main reason for my sudden recall of the Pinocchio story was the
umbrella-toting cricket rather than the puppet brat.
back across years of politically shaped thought and action, the
story appears asasimple illustration of the fact that without a
human beings are no more than mere puppets manipulated by their
their desires, their ignorance, and by those whom they have chosen to be
masters. It thus becomes most appropriate that thinking beings who have
give up their physical liberty that they might be better able to defend
universal right to freedom of belief and expression should be designated
of conscience. These men and women who have submitted their
a comfortless, sometimes cruel, confinement over long years that they
fellow citizens might exist in honour and dignity are also the keepers
remain in the jails of Burma over two thousand two hundred political
of whom barely twenty are known by name to the world at large. The
two thousand who remain anonymous are our unknown soldiers, the
heroes and heroines who have worked quietly to keep the movement for
strong and vital. On4January 2011, the Sixty Third Anniversary of
Independence from colonialism, the National Leagues for Democracy
random draw of the names of political prisoners by those who were
take the responsibility of supporting them materially or morally as far
circumstances allowed. The young man who fell to my lot was one of the
soldiers. He had been arrested in 2007 for attempting to pray for the
political prisoners at the Shwedagon Pagoda. Many of the young
had all been involved in the prayer movement were now scattered in
across Burma but he was relatively fortunate as he was at Insein Jail,
far away from his home. Preparing the food parcel to be sent to him was
of the abstemious conditions under which our comrades in jail have
many simple ways in which prisoners of conscience act as the keepers
conscience. When I was under house arrest, I madeahabit of having
quite late so that in my hunger I would not forget our comrades who
incarcerated not in their own homes but in jails, often in places far distant
their families lived. I knew they would not only be much hungrier
but would also be obliged to make do with the meagre and tasteless
that would be meted out to them. It renewed my commitment to our
refreshed my respect and affection for my colleagues onadaily basis.
wonderful thing about our keepers of conscience is their extraordinary
dedication. During the two days before our independence anniversary
we heldacharity bazaar to raise funds for political prisoners.
varied articles on sale were works of art of considerable ingenuity
sent in by our jailed comrades. There wereanumber of collage works
put together from hundreds and thousands of tiny slivers of paper
different kinds. The end products were vivid pictures of birds, dancers and
It wasaclear declaration that if the spirit is strong, there is no limit to
can achieve and that those who seem least fortunate can prove to be our
and benefactors. I have often received the most exquisite gifts from
in prison. Statuettes, model animals and toys intricately carved from
soap or wax; strings of prayer beads and shopping bags woven from
plastic;apiece of cloth beautifully embroidered with symbols of
justice and peace, love, harmony and unity, perseverance and hope, all
our women political prisoners. Skillfully and delicately worked into
embroidery were the unwavering hopes and aspirations that our women
holding out to those of us who were actually in far easier circumstances
were. This is why the image of Jiminy Cricket with his colorful,
clothes and innate chirpiness seems to me an appropriate
of conscience. The keepers of our conscience are cheerful,
and inventive and most of all, they are creaters of comfort in spite of
the comfortless lives they
themselves have to lead. (By Aung San Suu Kyi)
ကလေးများကြားတွင် ရေပန်းစားပါသေးရဲ့ လား။
အထင်ကရကာလများကို ရုတ်တရက် သတိထားမိ
သည့်အချိန်တွင် ထို မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မ၏မြေးများ သို့မဟုတ် အခြား
အစဉ်မပြတ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလျှင် အဖြေများကို ကျွန်မသိနေ
ကျွန်မခေါင်းထဲပေါ်လာပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်
ကံအားလျော်စွာ ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အကြီးဆုံးက အသက် ၂၀
၃ နှစ်ရွယ် ဂျပန်-အမေရိကန် ယောက်ျားကလေးပါ။ အိပ်ပျော်နေသည့်
နောင် လာမည့် ‘တောင်ကိုလှုပ်ဖြိုမည့်အချီ’အတွက် ကြံရွယ်ပြင်
ပင်နော့ချိုနှင့် ရင်းနှီးသူအတော်များများ ရှိကြခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုအနေနှင့်
ပုံပြင်ထဲတွင် စိတ်အဝင်စားဆုံး ဇာတ်ကောင်အဖြစ် တွေးထင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆိုးပေရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ထက် ဦးထုပ်ရှည်ကိုဆောင်း ထီးကိုင်ထားသည့် တရား
လှုပ်ရှားမှုများ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာသောအတိတ်ကာလများကို ပြန်လည်
ကလေးများ၏ပုံပြင်သည် လူတို့၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ၊ လိုအင်ဆန္ဒများ၊
ထုတ်ဖော်မှုဟူသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို ကောင်းစွာ
သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေထိုင်နိုင်ရန် သက်သာမှုကင်းမဲ့လျက် တခါတရံ ရက်
အကျဉ်းချခံရန် သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များကို ပေးဆပ်ကြသော ယင်း
ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၂၀၀ ကျော်အနက် ၂၀
အမည်ကျော်ကြားကြပါသည်။ ကျွန်မတို့၏ နှစ်ထောင်ကျော်သော အမည်
ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကို သန်စွမ်းသက်ဝင်နေအောင် ထိန်းသိမ်း
၂၀၁၁ ခုဇန္နဝါရီလ ၄ ရက်တွင်
ကျရောက်သော ၆၃ နှစ်မြောက် ကိုလိုနီစံနစ်မှ လွတ်မြောက်သည့်
ဆုတောင်းပေးခြင်းကြောင့် သူသည် ၂၀၀၇
ပါဝင်သူ လူရွယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်များအနှံ့တွင်
ထိုရဲဘော်လေးမှာ ကံကောင်းထောက်မစွာ သူ့နေအိမ်နှင့်မနီးမဝေး
အကျဉ်းကျလျက်ရှိနေပါသည်။ သူ့အတွက် အစားအစာထုပ်ကိုပြင်ဆင်နေရင်း
အစားအသောက်ချို့တဲ့မှုအခြေအနေဖြင့် သူတို့၏နေ့ရက်များအား အကျဉ်း
မနက်စာကို နောက်ကျမှ စားခြင်းအလေ့ကို ပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။
အရပ်များတွင် သူတို့၏အိမ်မဟုတ်သော အကျဉ်း
ကျွန်မ၏လေးစားမှုနှင့် မေတ္တာကို လန်းဆန်းစေခဲ့ပါသည်။
၂ ရက်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက်
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရောင်းချသောပစ္စည်းများတွင် အကျဉ်းကျနေသည့်
တီထွင်ကြံဆပြုလုပ်ပေးသော အနုပညာပစ္စည်းများ အတော်အတန် ပါဝင်ပါ
မျိုးကွဲ ငွေရောင်စက္ကူများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြုလုပ်
ပစ္စည်းများမှာ ငှက်များ၊ ကချေသည်များ၊ ပန်းများ၏ ထင်ရှား
လုပ်နိုင်တာကို တားဆီးနိုင်သည့်အရာမရှိကြောင်းနှင့်၊ အခွင့်အရေးမရှိဆုံးသူ
ဆရာများနှင့်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒီဖြစ်ရပ်က ထင်ရှားသောကြေညာ
လက်ရာမြောက်သောလက်ဆောင်များကို မကြာခဏ ကျွန်မလက်ခံရရှိခဲ့
ပါသည်။ သစ်သား သို့မဟုတ်
ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ဖယောင်းများဖြင့် အနုစိတ်ပြုလုပ်ထားသော ရုပ်ထု
အရုပ်များ၊ စိတ်ပုတီးများနှင့် ပလပ်စတစ်စများဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော ဈေးဝယ်
အချစ်၊ သဟဇာတမျှခြင်းနှင့်စည်းရုံးမှု၊ ဇွဲနှင့်မြော်လင့်ခြင်း အမှတ်အသားများ
အဝတ်စများ တို့ကို လက်ဆောင်ရခ့ပဲါသည်။
ပန်းထိုးပုံဖော်ချက်တခုစီသည် ကျွန်မတို့၏ရဲမေများ၏ မယိမ်းယိုင်သည့်
စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှုများကို သူတို့ထက် ပိုမိုသက်သာလွယ်ကူသော အခြေအနေ
သပ်ယပ်သည့်အဝတ်အစားများနှင့် မွေးရာပါ မြူးကြွနေသော ဂျင်မီနီ
ခရစ်ခက် ပုံရိပ်သည် ကျွန်မကို
ပသော တီထွင်ကြံဆသော သူများဖြစ်ကြပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်။ ၂၀၁၁
(ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၁
နေ့ထုတ် MAINICHI DAILY NEWS သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသော
Keepers of Conscience ကိုပြန်ဆိုပါသည်။)
၂၀၁၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇
pro-democracy leader Aung San Suu Kyi holds her dog
entrance of her home in Yangon on Dec. 30. (Mainichi)
her release from house arrest this past November, Myanmar’s
leader Aung San Suu Kyi has once again begun contributing her
from Burma” column to the Mainichi, endinga13-year absence from its
column, Suu Kyi intends to suggest how to press forward with Myanmar’s
movement, which faces major challenges in the authoritarian
to resume her monthly column whenaMainichi correspondent
her after she was freed from house arrest.
reporter andaphotographer met with Suu Kyi at her residence in
late December, and she handed them the first of her new “Letter from
columns along withamessage to the readers.
beginning of the year isatime for renewal, reinvigoration, resolutions and
back on 2010 and find that parts of the year were so little memorable as to
disappeared wholly into the lost wastes of time. How did I spend the first
2010? I cannot remember.
however, that it could not have been comfortable. Renovations to my
been started in December 2009 and stoppedafew weeks later by
lawyers worked to get the order reversed, I spent several months
the midst of cardboard boxes, thick woven blankets wrapped around
objects, assorted suitcases and leaning towers of books.
from my bed, which was wedged betweenahigh bookshelf, odd
a number of lumpy bundles, I hadagood view ofapeeling chunk of
that afforded me many moments of contemplation on the nature of
weather was cool, the jam-packed room seemed cozy, and the urban
camp-style of existence could be seen as something of an adventure. As
weather got hotter and hotter, however, the romance wore off, particularly
scaffolding that had been erected against the outside walls was in such a
that the windows of the bedroom could not be opened and large parts
night were passed in sleepless swelter. I did not feel in the best of health.
quarter of 2010 was not justaperiod of physical discomfort, it was also
intense mental activity. My lawyers would visit me on occasion to discuss
that we had lodged against the sentence that had been meted out to
Insein Jail court the previous year. I found the whole legal process
and learnt much from my highly experienced and able lawyers.
immense pride in them and in the Legal Committee of the National League
Democracy (NLD) that had been working hard since 1995 to uphold the rule
to defend the rights of prisoners of conscience in our country. As one
lawyers, U Nyan Win, wasamember of the Executive Committee of the
also learnt much of what was happening in the political world outside
and was able to participate to some extent in the decision making
year crucial to the political scene in Burma, posed intellectual
which, for me, were of far greater importance than health
time of the Burmese New Year that falls in mid-April, the court
that the renovations to my house could be continued. Overnight, what
an enclosure cut off from the sounds and movements of the world
becameaplace of constant noise and action as workmen swarmed all
so much to be done. A major project was repairs to the roof. For some
had spent the monsoon months moving my bed, bowls, basins and
my bedroom like pieces in an intricate game of chess, trying to
leaks and to prevent the mattress (and myself, if I happened to be on
getting soaked. Now that the roof would be made sound.
look forward to the next rains with equanimity. In Burmese,asound
roof is a
metaphor for security,areflection of the notion that if all was well at
top, all would be well throughout an edifice.
repairs and renovations meant there would be greater physical convenience
in the future. But much more important than the material
were the human contacts that were made possible.
for about five months (the work on the house went on from April to
withabreak of three weeks in-between), I was able to acquaint
with the lives and concerns of our workmen, to acquireabetter
of the difficulties with which the labor force of our country had to
to getaclearer idea of their hopes and aspirations.
consequence of the renovation project was frequent discussions with
Special Branch and other forces responsible for the security of the premises.
bringing in of men and materials had to be negotiated on an almost daily
we found that obstacles could be smoothed out with reasoning and
year that brought many improvements to my house, but what it
our country, which is the home of all our people, isamuch more
tale, to be told another time.
like to end this, the first article I have written since my release, by
my deep appreciation of the support and friendship the Mainichi
has given me over two decades and by sharing with its readership an
fromapoem that hadaspecial significance for my late husband and that
for its abiding wisdom:
therefore, to this day.
Salutation to the Dawn based onaVedic Hymn.
၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်ရှိနေအိမ်တွင်
လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ
ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် “မြန်မာပြည်မှစာ” ကော်လံကို တဖန်ပြန်လည်ရေးသားပေးခြင်းဖြင့်
၁၃ နှစ်ကျော် ဤစာမျက်နှာများပေါ်မှ ကွယ်ပျောက်နေခြင်းကို အဆုံးသတ်စေပါတော့မည်။
သူ့ကော်လံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အာဏာရှင်ဆန်သောအစိုးရ အား
စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်လျက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုများ အတွက် ရှေ့ရှုကာ
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် မိုင်အိနိချိသတင်းထောက်နှင့်
တွေ့ဆုံရာတွင် သူ၏ လစဉ်ကော်လံကို ပြန်လည်ရေးသားပေးမည်ဟု သဘောတူခဲ့ပါသည်။
“မြန်မာပြည်ကစာ”ကော်လံသစ်များ အတွက် ပထမဦးဆုံး ဆောင်းပါးကို ပရိသတ်များအတွက် နှုတ်ခွန်းဆက်နှင့်အတူ
ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းများ ပြည့်ဝသည့် နှစ်သစ်တခုဖြစ်ကြပါစေရန် ကောင်းမွန်သောဆန္ဒများစွာဖြင့် ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
ပြန်လည်သစ်လွင်ခြင်း၊ ပြန်လည်နိုးကြားစေခြင်း၊ သန္နိဋ္ဌာန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့်
၂၀၁၀ ကို ကျွန်မပြန်လည်ကြည့်မိပါသည်။ ရေညစ်များထဲတွင် အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသကဲ့သို့
ယင်းနှစ်၏အပိုင်းအစများသည် မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပင်ဖြစ်ရပါသည်။ ၂၀၁၀ ၏ပထမနေ့ရက် ကို
ကျွန်မ မည်ကဲ့သို့ အသုံးချခဲ့ပါသလဲ။ ကျွန်မ မမှတ်မိနိုင်ပါ။
သို့သော် ကွန်မပြောနိုင်သည်ကတော့ သက်တောင့်သက်သာမဟုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကျွန်မအိမ်ကို ပြင်ဆင် ရန် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်
ထိုအမိန့်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရန် ကျွန်မ၏ရှေ့နေများကြိုးစားဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ
ကတ္ထူပုံးများ၊ အမျိုးအမည်မခွဲခြားနိုင်သည့် ပစ္စည်းများကိုထုပ်ပိုးထားသည့် သက္ကလပ်စောင်ထူထုပ်များ၊
သေတ္တာ မျိုးစုံများနှင့် ယိမ်းယိုင်နေသော စာအုပ်ပုံများကြားတွင် လပေါင်းများစွာ ကျွန်မနေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။
ဖုထစ်နေသောအထုပ်အပိုးများကြားတွင် ညပ်နေသည့်ကျွန်မအိပ်ရာထက်မှ အပေါ်ကိုကြည့်လိုက်လျှင်
မျက်နှာကျက် အပေါက်အပြဲများကို ကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရပါသည်။ ထိုမြင်ကွင်းသည် သဘာဝ၏ဟောင်းနွမ်းပျက်ယွင်းမှု
သင်္ခါရတရား ကို အာရုံဝင်စားဆင်ခြင်နိုင်ရန် အချိန်များစွာပေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ရာသီဥတုအေးသောအခါ ပြည့်ကျပ်နေသည့်အခန်းမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိနေသယောင်ပါ။
မြို့ပြအ တွင်း တောစခန်းချရသလိုပုံစံ နေထိုင်ရခြင်းသည်
တခုခုအတွက် စွန့်စားခန်းလို ထင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ရာသီဥတု ပို၍ပို၍ပူလာသောအခါ
ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဘွယ်အာရုံများ လွင့်ပါးပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အိပ်ခန်း၏ပြတင်းပေါက်များအပြင်တွင်
ဆင်ထားသည့်ငြမ်းများကြောင့် ပြတင်းပေါက်များမဖွင့်နိုင်သောအခါ အိုက်စပ်ပူလောင်မှုဖြင့်
အိပ်မပျော်ခြင်းကို ညပေါင်းများစွာ ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်မသည် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေကို
၂၀၁၀ ၏ ပထမ ၃ လပတ်သည် ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်တောင့်သက်သာမရှိခဲ့ရသည့်ကာလဖြစ်ရုံ
မက စိတ်လှုပ်ရှားမှုလွန်ကဲခဲ့ရသောအချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ယမန်နှစ်က အင်းစိန်တရားရုံးမှာ
ကျွန်မ အပေါ်ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကို အယူခံဝင်ရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကျွန်မ၏ရှေ့နေများ
အခါ အားလျော်စွာ ကျွန်မထံလာရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားလုံးသည် စိတ်ဝင်
စားစရာကောင်းသည်ကို ကျွန်မသိမြင်လာရပါသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး စွမ်းရည်ပြည့် ကျွန်မ
၏ ရှေ့နေကြီးများထံမှ များစွာသင်ယူခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ “ဥပဒေစိုးမိုးရေး”ကိုကိုင်စွဲထားလျက်၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင်
“ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံထားရသူများ၏ရပိုင်ခွင့်များ”အတွက် ကာကွယ်ပေးနေကြသော
သူတို့တတွေနှင့် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ ဥပဒေကော်မီတီတို့ကို ကျွန်မ လွန်စွာဂုဏ်ယူမိပါသည်။
သည့်အတွက် ကျွန်မ၏အိမ်ပြင်ပတွင်ဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံရေးအကြောင်းများကို
များစွာသိမြင် လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပါတီ၏အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်လည်း အတိုင်းအတာတခု
အသိပညာစိန်ခေါ်မှုများ သည် ကျွန်မအဘို့ ကျန်မာရေးထက် လွန်စွာအရေးကြီးလျက်ရှိနေပါသည်။
မြန်မာ့နှစ်ကူးချိန်ကျရောက်မည့် ဧပြီလလယ်လောက်မှာတော့ ကျွန်မ၏အိမ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်
ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်
ပြတ် အသံတိတ်ဆိတ်နေရသည့်နေရာကလေးသည် အလုပ်သမားများ နေရာအပြည့်လွှမ်းလျက် အသံနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ
လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါသည်။ အဓိကအနေကတော့ ခေါင်မိုးကိုပြင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများ စွာ မုတ်သုန်လများတွင် ကျွန်မ၏အိပ်ရာရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ခွက်တွေ၊ ပလုံးတွေနှင့်ပုံးတွေသည်
ရှုပ်ထွေး နေသောစစ်တုရင် ကစားတပွဲကအရုပ်များလို မိုးယိုမှုများကိုဖမ်းဆီးရန် ကျွန်မ၏အိပ်ခန်းတွင်း
ကြိုးစားနေရာယူထားကာ အိပ်ရာ(နှင့် အကယ်၍ အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျွန်မရှိခဲ့လျှင်လည်း ကွန်မကိုပါ)
စွတ်စိုမှုအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ ခေါင်းမိုးမှာ အသံစုံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။
နောက်မိုးရေတွေကို ကျွန်မတည်ငြိမ်စွာ စောင့်မျှော်နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာစကားမှာတော့ အမိုးကောင်းပါက လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုတင်စားပါသည်။ ထိပ်ပိုင်းမှာ အားလုံးကောင်းလျှင်
ဗိမ္မာန်တလျှောက် အားလုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်မည်ဟူသည့် ဆိုရိုးကိုထင်ဟပ်စေပါသည်။
ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းများသည် အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တောင့်သက်သာမှုကို
ပိုရှိစေမည်ဟု ဆိုရမှာပါ။ သို့ရာတွင် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် သက်မဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်စာလျှင်
ဖြစ်နိုင် သည့်လူသားချင်းဆက်ဆံရာမှာ ပိုမိုအရေးပါပါလိမ့်မည်။
အိမ်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလအထိ ကြားတွင် ၃ ပတ်နားလျက်
၅ လနီးပါး အချိန် ကြာခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွင်း ကျွန်မတို့၏အလုပ်သမားများ၏ဘဝများနှင့်ပူပန်မှုများကို
ကျွန်မ နေ့စဉ် တွေ့ကြုံရင်းနှီးခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ၏ လုပ်သားအင်အားစုတွေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်
အခက်အခဲများနှင့် သူတို့ရဲ့မြော်လင့်ချက်များနှင့်ပြင်းပြသည့်ဆန္ဒများ၏ ပိုမိုထင်ရှားသည့် အမြင်များ ကို ကောင်းစွာနားလည်
အိမ်ပြင်ခြင်းအစီအစဉ်၏ အခြားအကျိုးဆက်တခုမှာ အထူးစုံစမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊
ခြံဝန်းအတွင်း လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေရသူများနှင့် မကြာခဏ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
လူများနှင့် ပစ္စည်းများ ခြံတွင်းသို့သွင်းရခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းရသည်မှာ နေ့စဉ်နီးပါးဖြစ်ပါသည်။
ထိုစဉ် အခက် အခဲအတားအဆီးများကို နှစ်ဘက်က အကျိုးအကြောင်းနှင့် အလျှော့အတင်းပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်
၂၀၁၀ သည် ကျွန်မအိမ်အတွက် ကောင်းမွန်တိုးတက်မှုများဖြစ်စေခဲ့သည့်
သို့ရာတွင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံသားများနေထိုင်ရာအိမ်ဖြစ်သည့် ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်အတွက်
ထိုနှစ်သည် ဘာတွေယူဆောင်ပေးခဲ့သလဲဆိုသည်မှာ ပိုမိုအလေးထားရမည့် ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ နောင်တချိန်မှာ
ကျွန်မအား အနှစ် ၂၀ ကျော် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်အားပေးခဲ့သည့်
“မိုင်အိနိချိ သတင်းစာ”ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုဖော်ပြရန်အတွက်၎င်း၊ “မိုင်အိနိချိ
သတင်းစာ”၏ ပရိသတ်အား မျှဝေရန် အတွက်၎င်း၊ ကျွန်မခင်ပွန်းအတွက် အထူးအရေးပါစေခဲ့သည့်ကဗျာ
ကျွန်မနှစ်သက်သည့် ယင်း ကဗျာဥာဏ်၏ ကောက်နှုတ်ချက်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ကျွန်မလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးမှ
ပထမဦး ဆုံးရေးတဲ့ ဤဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။
မနေ့ကတော့ အိပ်မက်တခုပါ …
ဒါပေမင့် … ဒီနေ့ ကောင်းစွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်
မနက်ဖန်တိုင်းကို မြော်လင့်ခြင်းရဲ့အမြင် ဖြစ်စေပါ …
ဒါကြောင့် … ယနေ့ကို ကောင်းစွာ သုံးသပ်ကြည့်ရှုပါ
(Vedic Hymn ကိုအခြေပြုသော The
Salutation to the Dawn မှ )
၁ ၊ ၂၀၁၁ နေ့ထုတ် Mainichi သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ Looking
Back, Looking Forward ဆောင်းပါးကို ပြန်ဆိုပါသည်။)